Tadiom-pitiavana | 14
- "an ! tena . . . tsy haiko, fa . . . ."
Nojeren’i Alexia akaiky teo ampototry ny jiro,
- "Hery an ! an’iza hoy aho ity, dia sahinao ve?
- "Tsia, ry Alexia, azafady fa tena tsy afa-nanoatra aho."
Tsy hitan’i Hery intsony izay hambara fa tohina ny lelany. Very hevitra ary nisangodiana taminy ny tany aman-danitra.
I Alexia etsy toa nidobodoboka mafy ny fony, tsy fantany intsony ny lalan-kalehany, nahodiny teny amin’ny vatany ilay lamba lehibe dia nivoaka izy. I Hery etsy manenina ity zava-bitany, fanadinoana faharoa, lozan’ity lamba fotsy nanakona ny hamaintin’ny fiainako. Nihazakazaka izy nanaraka an’i Alexia, nisintona ny tanany nefa nakifiny.
- "Hery, dia sahinao ve ny nanao ahy tahaka izao. Fantatrao fa tiako ianao dia fitahinao amin’ny lainga tsara lahatra. Tononkalom-pitiavana nefa miharo famitahana ahy? Hery an ! tsy tantiko mihitsy izao. Handeha aho!"
Nanaovan’i Alexia ny akanjony, i Hery amin’io tsy hitany intsony izay hatao fa nitoloko teo amorom-pandriana fotsiny, vaky fo, very hevitra amin’izay fifonana tokony hataony.
Efa namoha ny varavarana ity tovovavy vao nidradradradra nitomany i Hery, nifona mafy fa tsy nohainoin’i Alexia intsony;
Efa tafidina any ambany i Alexia vao tonga saina ny lehilahy fa hiakanjo hanenjika ity malalany. Tsy tafakanjo tsara akory dia injay izy migodogodona midina ny tohatra nanaitra ny rehetra.
I Alexia efa eny antsorok’i Vero mitalaho mafy ny haterina hody sady latsa-dranomaso.
Tsy misy intsony ny hoe fa misy inona, fa gina ny rehetra, ny sasany tsy mahazo mihitsy izay mitranga. Hany herin’i Vero dia nitondra an’i Alexia tany anaty fiara ary nanakana an’i Hery sy ny namany tsy hanatona ity tovovavy lonahan’ny ranomaso ity aloha ambara-pahafantarana izay zava-nitranga.
Gaga i Ratrema nahita an-janany vavy mena maso sy mivaloharika tsy misy ohatr'izany miditra ny vavahady, fa izy mihitsy moa no namoha tany ivelany tany. Tsy navelany handroso koa ry Vero mivady vao nahita an-janany nitomany izy. Hany herin'iretsy mpivady niverina nandray ny fiarany ary nitodi-doha nody, tsy nihevitr'izay hijery izay niafaran'i Hery akory satria efa notantarain'i Alexia tamimbangovangony ny fandehany. Hay koa ingahy Ratrema tsy nipoizin-tory mihitsy iny alina iny fa lasa saina... Fantany tsara tany andohany tany fa i Hery no tao ambadik'iny fety io hariva io fa izy tsy te-hamasoka an'i Vero fotsiny. Somary nanaitra azy koa moa Razazavavy ka izany no tena nanginany satria, hoy izy, mety mbola misy andro hifankahitako amin'izy iny ihany any aoriana any.
Nosakambininy ny zanany ary nifamihina mafy izy mianaka namakivaky ny tokotany sy niditra tany an-trano. Mbola mando sy misavoritaka ny volon'i Alexia nefa tsy avy akory ny orana iny alina iny... azokazon-dRatrema ny fandehan-javatra nefa nangina izy ho fiaraha-miory amin'ity zanany...
- "Papa a, tena olon-tsy vanona izy iny!" hoy i Alexia sady nitomany mafy teo an-tratran-drainy indray izy.
- "Mangina anaka fa aza mitomany toy izao fa marary eo ianao. Aoka izay fa isika mianaka efa nahalala hatrizay fa tsy dia mazava loatra ny toe-tsain'izy iny..."
- "Nefa ange ry Papa ohatry ny efa niova ihany izy iny e! indrindra tato ho ato!"
- "Alexia a! ny olona toy ireny dia mijanona toy izay foana, mandrakizay!"
Toa hitan'i alexia indray ilay Rainy taloha, mananatra sy mora fo hatry ny nahakely azy. Hadinony ny fahotana mahafaty vitan-drainy fa reny ny fidobodoboky ny fony fantany fa tia azy. Tsy misy mahatoky mihoatra ny fitiavan'ny ray amandreny marina eto an-tany, hoy izy tany antsainy tany...
- "Alex a! ndana reitsy miakatra fa reraka a! rahampitso tohizana ny resaka..."
- "Papa a! ary ahoana ihany ianareo sy Mama?"
- "Eee! indrisy anaka! toa rano raraka angamba izy ity fa na izaho na izy toa tsy misy miezaka ny handravina izy ity e!"
- "Fa nahoana ianao ry Papa no minia tsy miezaka?"
- "Efa vehivavy lehibe ianao anaka ka tsy hanafenako inoninona: tsy nisy niafina taminao ny zioga nentiko hatramin'izay tato amin'ity tokatrano ity. Tsy nisy tsy nandeferako rehefa mety ho ditra sy hadalana isan-karazany, eny na dia nitranga tato amin'ny tokatranoko sy hatreny amin'ny fandrianan'ny fanambadiako aza, noleferiko teny foana... indray mandeha ve aho reitsy no solafaka dia hanaovana scène tsy misy ohatr'izany?
- "Papa! efa ela ihany ange ianao sy iny vehivavy iny no niaraka e!"
- "Marina izany fa izaho tsy nanana afa-tsy olona iray. I Malala iza no tsy efa hitako niaraka taminy?"
- "Tsy afaka hitsabaka izay fiainanareo mivady aho ry Papa fa anareo ny anareo sady mbola zanaka aho. Ny fiainako koa ity he ambony ambany, ny fiainantsika mianakavy ity, olona iray dia nahapotika azy... handeha hiakatra aho ry Papa hamisavisa izay hataoko fa bonne nuit ianao..." sady norohany teo amin'ny handriny ny rainy dia lasa izy niakatra. Nony nandingana zana-tohatra iray i Alexia no niverina tampoka tao an-dakozia hisotro rano mangatsiaka hampitoniany ny fony mafana loatra.
Saika tratra teo an-tohatra indray i Malala nihaino ny resak'izy mianaka teo. Hay reny ny nidinan-dRatrema sy ny resaka rehetra nataon'izy mianaka...
Niditra haingana tao anefiny izy ary nihodinkodina eran'ny trano...inona re no ataoko e? hoy izy nitana ny handriny...
Tampoka teo dia navoakany ny valizy be iray ary nampiriminy tao ny akanjony vitsivitsy. Nivoaka ny efitra izy ary niditra tao anefitranon'izy mianadahy kely. Nojereny kely ireto zanany mianadahy izay efa tena renoky ny torimaso, tsy mahalala izay rahona mitatao iainan'ny fianakaviany akory...I Toky mivelatra tanana toy ny fiaramanidina, asa manonofy hiakatra any amin'ireo anjelikely namany angaha izy io, ary i Cynthia toa minono ny tanany havia sady mandry mihorirana, tsy misy valaka amin'ireny saribakoly mahafatifaty ireny.
Ireo sisa no nanankinan'i Malala ny ho aviny ary tsy ahoany intsony izay harenan-dRatrema tazan'ny masony.
Noraofiny izay akanjon-jaza zakany dia nentiny tany anefitra hampiriminy ao anatin'ny valiziny, ary natosiny tao ambanin'ny fandrianany rehefa voahidy.
-Efa vonona ity ny entana fa dia hiandry ny andro ho maraina aho! hoy i Malala niverina namonjy fandriana haingana satria reny ny fikatrokatroky ny kapan-dRatrema. Fa mba nanao ahoana kosa i Hery nony lasa ny vahiny?
Nisava ho azy ny hamamoan'izy efatra mianadahy nahare ny tabataba sy ny godogodona nidina ny tohatra teo ireny. Toy ny noroahana ry zareo fa indreny nanao izay azony atao hamonjy varavarana, samy nihanahana tsy nahazo resaka kanefa tsy te-ho tratra farany hiandronan'ny rihitra eo ka dia lasa izao, nifanosika nanao diabe teo daholo.
Tsy nisy inoninona hitan'i Hery izany rehetra izany...jenjin'ny ranomaso tanteraka izy ary nihodina taminy ny tany aman-danitra...nahatsiaro ny tenany ho very tanteraka izy...Nony elaela, nitraka izy ary ny loto sy ny trano misavoritaka ny nameno ny masony...Mikorontana toy ny tranony koa ny sainy ka tsy hitany marina izay atao, fantany izy fa tsy hahita tory amin'izany fahoriany izany. Nitsangana tsy fidiny ny anao lahy ary nanomboka nadroaka ireto vera sy lovia niparitaka eran-ny trano. Niondrika nitsindroka izay potika sigara nisisitsisika teny ambony latabatra ka tsy tao anaty cendrier.
Nalainy ny kifafa ary lasa izy namafa trano, niezaka ny hamafa ny alahelo tao anatiny ihany koa. Iny alina iny dia voahosony savoka ny trano ary tafaveriny ny entana rehetra. Toy ny tsy nisy iny fety iny taminy satria fahatsiarovana ratsy loatra hiraiki-tapisaka ao ampony. Fantany fa ho sarotra amin'ity indray mitoraka ity no hamerina ny olon-tiany. Tsy te-hanenjika ny tenany intsony anefa izy fa efa be izay latsa sy nenina izay... Poa toa izay dia nilamina ny trano, voasasa ny vera ary iny izy no niakatra natory miaraka amin'ny toaka mbola nanasaka tavoahangy, hany fanafody hitany hitsabo ny aretim-po mikiky ny ainy iny alina iny.
Hadinony anefa fa toaka ihany iny antanany iny: tsy hampikatona ny feriny akory fa alikaola vao maika hampangirifiry azy mafy ary hampangina vetivety fotsiny ny fahatsiarovany fa handoro ny atiny sy ny aferony rehefa mifoha izy ny maraina.
Teo ambavahadin'i Hery i Malala telo mianaka vao nijanona iny maraina iny. Hitany fa mbola mihidy avokoa ny varavarankely rehetra. Fantany fa mbola matory i Hery.
Notsindriany ny bokotra fanairana ka efa fanimpitony izy vao nisokatra ny varavarana tao ambany. Mbola fanin'ny toaka anefa izy ka nivandravandra nahita an'i Malala mitrotro an'i Toky ary eo amin'ny tany valizy be iray sy couffin misy an'i Cynthia kely.
- "Maninona aty nareo?" hoy i Hery gaga...
- "Ampandrosoy aloha izahay raha azonao atao!" hoy Malala nangata-dalana hiditra.
Rehefa avy nametraka an'i Toky teo ambony seza i Malala dia nanomboka nitantara ny fandehany rehetra, ny tsy inoany intsony ny fanambadiany andRatrema ary ny fahalalany ny nitranga iny alina iny... - "Tsy hoe manararaotra ny fahavoazanao aho ry Hery," hoy izy niondrika, "fa tena tsy hitako izay aleha! vaky ny lohako."
- "Tsy sarotiny amin'izay hijanonanareo telo mianaka mihitsy aho, satria manana adidy be dia be aminao, sy amin'izy ireo, nefa fantatrao i Ratrema fa olona tsy hanaiky ho very voninahitra izany ka matahotra aho! izay no mampanahy ahy."
- "Hery a! tsy voatery ho fantany ange hoe aty izahay e, sa mety ianao raha mba any amin'ny Dadabe sy Bebenao izahay no mipetraka?"
- "Aoka itsy, hoy i Hery nanda mafy. Tsy ho hainao ny miaina any Ambanivohitra ry Malala fa sois réaliste a! ary raha maninomaninona any ny zazakely, aiza no entina? misy dokotera any sa farmasia?"
- "Aza tezitra toa io moa ry Hery a! efa mivadika koa ange ny saiko fa aza omena tsiny aho e!"
- "Eny aza, mijanona eto fa à condition que..."
- "Que? inona?" hoy i Malala gaga...
- "Qu'on ne fera jamais l'amour," hoy i Hery nitsangana sady niodina tsy hifanojoan'ny masony amin'ny an'i Malala.
- "Manaiky aho," hoy izy nanapoapoaka ny ratsan-tanany.
- "Andeha hiakatra any ambony," hoy i Hery nandray ilay couffin kely "fa halamintsika ny trano. Mety hevitra tsara ihany ny nankanesanao aty amiko satria tena tsy te-ho irery mihitsy aho izao sao manaonao foana ato."
Nosokafany avokoa ny varavarankely ary notarihiny tao amin'ny efitry Ramihary i Malala.
- "Amboarintsika ato dia ato izany no efitranonareo," hoy i Hery nanakipaka ny rideau sy namoha ny varavarankely hidiran'ny rivotra sy ny hainandro maraina. "Efa fotoana koa angamba izao hanesorana ny entan'i Mama amin'izay" hoy ihany izy ampisentoana.
Iny i Malala dia nisolo akanjo ary nampiditra jean hahazoany miasa. Nosokafany ny valizy ary navoakany tao ny kilalao isan-karazany izay zakany holalaovin'i Toky. Notarihin'i Hery tany anefiny izy dahy fa efa mba madio any tsinona ka tany no napetrany hilalao. Nasiany fanaka lehibe iray nibahana teo andalatsara tsy hahafahan'i Toky midina.
- "Tokony hasiana fefy izany eto," hoy izy ary hasiana takony daholo ireto prises miharihary ireto." Nojereny i Malala efa vonona amin'ny kifafa sy borosy tongotra ary lasa izy nitady scotch aloha farafaharatsiny hanampenany ireo zavatra mety hitera-doza ireo.
Nony vitany izay dia niverina namonjy an'i Malala indray izy ary namoha ireo armoaran-dreniny anakiroa..." Ataoko ahoana ireto akanjo ireto ry Malala?"
- "Toa tsaroako ianao tamin'ireny fisehoanareo sy Alex ireny fa nanana havana akaiky ihany, aiza izy ireny izao? maninona raha omena azy ireo izay mbola tsara?"
- "Hevitra mety izany ary ny ambiny?"
- "Asa, omena ny mahantra ohatra, tsy haiko! izany aloha no fanaon'ny olona ry Hery fa tsy haiko ka! reninao izy iny ka tsy sahy miteny be loatra aho..."
- "Aleo aho haka harona lehibe any ambany dia hatototra ao anatiny ao aloha. Amin'ny herinandro izany hita eo. "
- "Oadray! any ihany aho dia hoentiko miakatra eo ny berceau ko taloha!" hoy izy nitsikitsiky. "Mbola tena tsara mihitsy izy izay ary izany no tsy nanarian'i Mama azy. "Ho an-jafikeliko", hoy izy isaky ny tadiaviko ariana ilay izy..."
- "Tanteraka ihany ity ny teniny ry Malala..."
Malefaka dia malefaka ny feon'i Hery ka nahababo ny fon'i Malala izay miezaka ny tsy ho lavo intsony. Efa tantara hafa izao, hoy izy nanitsy ny sainy ary efa fiainana hafa...
- "Hery a! hitady asa koa aho," hoy izy nibanjina ity rain-janany...
- "Tsisy hevitra izany ry Malala fa ataonao aiza izy dahy? ny rainy efa tsy hitany, ianao koa hivoaka ho aiza? adidiko ianareo izao ary aza matahotra fa hiezaka mafy aho!"
Raha nody tao an-trano Ratrema iny hariva iny dia gaga fa nangina dia nagina ny tanàna. I Zefa mpiambin-tanàna no nitsena azy ary nitantara izay niseho. Tsy namaly i Ratrema fa niditra tao an-trano, nanipy ny palitaony teo ambony sezan'ny salon dia niakatra tany ambony. Novohainy tsirairay ny varavaran'efitra dia tsy nahita na iza na iza izy. Ny entan'i Alexia no tsy nisy nipika, izay izy vao nisento kely. Lasa indray izy nidina tany ambany dia naka ny findainy tao anaty palitaony.
- "Hery, allô?"
- "Ie, izaho ihany Monsieur Ratrema" hoy i Hery niavonavona koa
- "Tsy hi-creer problème amin'ise aho," hoy izy niteny moramora, "any angaha ry Malala? aza mandainga ialahy fa te hi rassurer ny tenako fotsiny aho, any ve izy?"
- "Ie, nankaty ry zareo..."
Nisento i Ratrema dia nakimpiny ny masony...
- "Ho alainao aty angaha ry zareo?" hoy i Hery
- "Tsia, aleo aloha izy ho any fa amin'ny manaraka aho miantso an'ise. Veloma ao amin'izy dahy ao."
- "Veloma!" hoy i Hery mbola saika hanohy resaka hanontany izay momba an'i Alexia, kanjo ny veloman-dRatrema no tonga aloha.
Niverina niakatra tany ambony indray i Ratrema ary nandamina ny efitranon-janany. Tiany loatra mantsy ireny zaza ireny sady mpiara-milalao aminy isan-kariva, hany ka nahatsiaro tena ho banga izy.
Efa hariva i Alexia vao niditra ny trano... Hatsatra kely ny tarehiny nefa velontsiky aoka izany izy nahita an-drainy.
- "Papa!" hoy izy sady nanoroka an-drainy izy.
- "Alexia!" hoy ny rainy namihina mafy azy...nahavariana an'i Alexia ilay fihina mafy nataon-drainy ka nihataka kely izy ,
- "Misy inona ry Papa?"
- "Lasa nipetraka any amin'i Hery i Malala," hoy izy hendratrendratra.
- "Any amin'i Hery? ary izy dahy?"
- "Lasany any koa!"
- "Papa a, ndao alaina any fa inona no antony hitondrany ireny zaza ireny any? ramatoa tsy misy saina, raha te-hiaraka amin'i Hery izy, tsy nadeha tany hatrizay, fa maninona ny zandriko no entiny any? sady amin'izay fahavaloko! hoy i Alexia niefonefon'ny hatezerana.."
- "E! aoka re anaka fa aleo aloha amin'izao a! tsaratsara ho anay aloha ny misara-toerana mba samy hieritreretanay..."
- "Fa tsy any amin'i Hery!" hoy i Alexia namaly andrainy...
- "Tsara kokoa aza izy any amin'i Hery amin'izay ny olona rehetra tsy hahalala izay miseho ato amintsika..."
- "Papa a, ny voninahitra aloha avelao any fa ahoana no hamelomany ireny zaza ireny aminao? ny karaman'i Hery? sa hanao inona ity Mama hono? olona tsy niasa hatrizay niainany!"
- "Hanampy azy ankolaka ihany aho," hoy Ratrema niverina nipetraka..."mbola vadiko izy ary any aminy ny zanako..."
- "Izaho aloha ry Papa miala tsiny fa izay hifanatri-tava an'i Hery dia tsy hisy mandrakizay a!"
- "Avelao aloha izany any fa inona ity hohanintsika? inona no masaka ao?"
- "Asa, andeha hojerena izay nandrahoin-dRazay ao..."
- "Ary lasa aiza Razay?" hoy i Alexia gaga nahita ny fatana nangatsiaka sy ny blouse fotsy nihantona tao andakozia...
- "Efa nolazain'i Zefa ahy fony aho vao tonga fa lasa nalefan'i Malala nandeha izy."
Natonton'i Alexia tamin'ny carreaux ny kitapony sy ny poketrany.
- "Papa, nefa izaho izany noana!" hoy izy nidongy tamin-drainy...
- "Ndao handeha hihinana any ivelany ary koa inona moa izany?" - "Dia inona no ho hanin'i Zefa ato?"
- "Entintsika izy ko maninona moa? hidina mafy ny trano dia lasa isika! sa tsy mazoto ianao anaka?"
- "Ka inona moa no atao eo? mba hinatra hanao lakozia amin'izay aho hoy i Alexia nitsindroka ny poketrany..."
Nihomehy ny rainy ary nandray ny lakilen'ny fiara sady nampiditra ny palitaony.
- "Zefa a!" hoy izy nipoitra teo ambaravarana. "Miomana ise fa hiaraka hisakafo aminay!"
Afaka atsasa-kadiny dia lasa izy telo niverina niditra ny renivohitra. Mahafinaritra ery ny mahita an'Iarivo mirehitra jiro amin'ny alina fa toy ny fanala manazava eny antsefatsefan'ny havoana izany. Mbola feno olona mivezivezy sy mitsangatsangana moa ny arabe satria Asabotsy hariva ny andro. Indreny ny mpifankatia mifampidoladola mamindra miadana hamonjy fodiana ka ny fisakambinan'izy ireny no nampamolivoly ny fanahin'i Alexia nahatsiaro ny fotoana rehetra niarahany tamin'i Hery...Ny feon'i Zefa avy ao aoriana no nanaitra azy tampoka nony nandalo teo Behoririka ry zareo raha iny handroso ho any Analakely iny.
- "Bema! i Bema marina," hoy izy nihoraka!
- "Iza indray ity i Bema?" hoy i Ratrema gaga fa anarana mbola tsy henony mihitsy izany...
- "I Bema rahalahiko!" hoy i Zefa, "izy mihitsy io, mijanona hoe M'se Ratrema?"
Naka toerana hijanonana i Ratrema ary nanalava ny masony hijery ireo olona mijoro miamboho eo ampihinanana vary mitsangana...
- "I Bema io e!" hoy ihany i Zefa nanamafy.
- "Mandehana jereo tsara aloha ry Zefa fa aza eo no miantso fotsiny a!" hoy i Alexia sorena sady nanara-maso ity mpiasany...
Nierika ilay tovolahy natao hoe Bema ka taitra mafy nahita an'i Zefa nitsikitsiky nanantona azy. Latsaka ny sotro teny an-tanany fa may koa izy hiarahaba an'i Zefa..
- "Mama a! ny rahalahiko marina!" hoy izy nitsinjaka, "i Zefa! hay ialahy mbola tany?"
- "Inty aho ka!" hoy i Zefa tsy nino koa ny fahitany ny rahalahiny...nifampijery bika izy roalahy, samy efa lehilahy lehibe...ny endrika no mbola tsy niova loatra na nandroso aza ny taona...
Niherika nijery an-dRatrema i Zefa ary hitany izy mianaka fa gagagaga, ka notarihiny hanantona teny i Bema.
- "Andraso aloha aho handoa vola!" hoy izy nisikotra ilay vola taratasy malotoloto tany ampaosiny handoavana ilay loha-kisoa matsiro vao nohaniny teo... Namafamafa molotra aoka izany izy aloha ary namafa ireo tanany tamin'ny patalohany vao nanatso-tanana hiarahaba an-dRatrema.
- "M'se Ratrema," izy no Bemananjara zandrikolahy!
- "Izy kosa no M'se Ratrema patiraoko!" hoy i Zefa faly ery
- "Fa efa ela angaha ianareo no tsy nifankahita?" hoy i Ratrema gaga..."toa mbola tsy reko mihitsy ny anaranao manko!" hoy izy.
- "Efatra mianadahy izahay no zanaky Dada sy Neny," hoy i Zefa niezaka namintina ny tantarany. "Tany Ambanivohitry Toamasina izahay no nipetraka, araka ny efa notantaraiko anao. Maty tamin'ireny rotaka tamin'ny 2002 ireny anefa ny Ray aman-dreniko ary ny zandriko roa vavy nentin'ny milisy an-keriny ka izahay roalahy samy nirifatra nitsoaka ary tsy nifankahita intsony raha tsy izao indray..." hoy izy latsa-dranomaso kely.
Nanganohano kely koa izy mianaka nandre izany tantara mahonena izany, hany ka tsy nisy te-hihetsika teo...
Samy nangina kelikely aloha, kanefa i Alexia tsy naharitra intsony ny hanohanany ka dia niteny:
- "Tsy aleo ve mihinana eto rehefa izany?" hoy izy
- "Asa!" hoy i Ratrema tsy te-hanaiky nefa koa tsy te-handà, nahita ireto olona be dia be milahatra mihitsy hihinana eo...
- "Sa hijanona eto ise ry Zefa hiresadresaka amin'ny zandrin'ise? alainay eo ise avy eo fa i Alexia tsy tiako hisakafo eo!" hoy izy nivantana.
- "Tsy maninoa M'se Ratrema ka! vao maika tiako," hoy izy namaly.
- "Ity ny vola ary hisakafoananareo roalahy dia eto ihany ny fotoana avy eo, afaka adiny roa! mety?"
- "Eny Tompoko," hoy i Zefa nanara-maso an-dRatrema namelona ny fiara.
Nony lasa izy mianaka dia samy nangina kelikely aloha...
- "Fa maninona aho no tsy avelan'i Papa nihinana teo?"
- "Dray! fa ianao ve adala e! taiza koa no nisy vehivavy nihinana tamin'ireny?" hoy i Ratrema nitrerona kely an-janany.
- "Oay! nisy vehivavy nihinana teo!" hoy i Alexia namaly kely, "sady izaho angaha voatery hihinana teny fa nentinao tato anaty fiara ny anjarako!"
- "Dia tsy leo doika mihitsy ianao ity ka! nandritry ny fiainako aho ry alexia niasa mafy mba tsy hahitanao izany mihinana eny amoron-dalana izany, nefa ity ianao te-hietry hidina..."
- "Papa a! diso hevitra ianao! tsy mahantra mihitsy ireny olona hitanao mihinana teo ireny! sady izao ange ry Papa e: tsy mba nisy mihitsy ny fotoana tamin'ny fiainako hifangaroako amin'ny olon-tsotra: tsy mba mana-namana aho, mihidy ao anatin'io villa be io foana aho rehefa tsy any ampianarana... te-hiova aho, te-hifanerasera aman'olona," hoy i Alexia
Lasa ho azy teo ny fisainan-dRatrema nihaino an-janany. Marina izany fa tsy mba mana-namana afa-tsy Hery tokoa ity zanany. Nihidy tao anaty faribolan'ny fianakaviany sy ny fianarany ary ny fitiavany tao izy ka lasa te-hitroatra...efa fotoana angambany izao hanokafana ny lalany sao tara loatra, hoy i Ratrema nisento kely.
- "Ka atombokao amin'ny inona ary ity fiovanao?" hoy i Ratrema nanatongilana ny lohany hihaino izay hevitra hafahafa mety holazain'i Alexia.
- "Asa? inona re? tsy afaka ny hieritreritra intsony aho aloha izao fa noana!" hoy izy nanova resaka.
Teny Ambatonakanga izy mianaka vao nijanona hihinana tao amin'ity hotely iray. Efa be be olona ihany tao sady nisy hirahira hialana voly. Hadino vetivety teo aloha ny sorisory sy ny olana mamatotra azy mianaka fa injany hira mamelovelo, mitory fitiavana no asandratr'itsy tovolahy mpihira; manome fahafinaretana ho an'izay rehetra nisakafo teo.
Lasa saina kely i Hery rehefa avy niantso iny Ratrema. Gaga izy nahita fa tsy tezitra mihitsy Ingahy lehibe. Nanontany tena izy hoe fa nahoana, nefa tsy hitany mihitsy ny valiny. Nanatona azy i Malala sady nandray ilay finday teny aminy.
- "Hery? fa iza ilay teo?" hoy izy sady nanokatra ilay finday izy hijereny ilay anaran'olona niantso teo...
- "Ratrema? dia ahoana?" hoy izy natahotra..
- "Nolazaiko azy hoe aty ianareo," hoy i Hery natahotra izay mety ho valiny...
- "Hay!" hoy i Malala nampifamatotra ny tanany. "Dia rahoviana hono izy no haka anay?"
- "Tsy haka anareo izy ka!" hoy i Hery nibanjina azy...
- "Tena hafoiny izany ireo zaza ireo?" hoy i Malala tezitra indray. Tany anatiny tany manko nisy tsirimpanantenana fa alain-dRatrema izy telo mianaka. Nanomboka nitebiteby i Malala ny amin'izay ho tohin'ny fiainany. Hatrizay manko dia teo foana i Ratrema niahy azy, ary tao antokatranony izy dia ny vavany fotsiny no misokatra dia tonga eo anatrehany izay tadiaviny.
Nandritr'izay roapolo taona nanambadiany izay, dia milomano tao anaty harena be izy ary tsy nandalo tao amin'ny sainy mihitsy hatrizay izany hoe tsy hisy izany. Efitra kely izao no hany hitoeran'izy telo mianaka. I Hery ity no voatery hiahy azy aloha...marina fa rain-janany nefa mbola tanora loatra i Hery sady mbola tokony hanana fiainana hafa noho izao sahady...
Fantatr'i Hery ny tany andohany, nangina tsy niteny anefa izy satria mba niasa koa ny sainy amin'ity fiainany, zary manan-janaka hokarakaraina tsy satry.
- "Malala a! fantatro sady azoko tsara izay mampiasa ny sainao, nefa mahereza ry Malala! anatra ho antsika angamba izao fiainana izao, ka samia isika hitraka... veloko ireo ary veloko ianareo fa aza matahotra!"
- "Misaotra ry Hery!" hoy i Malala.
Niandriandry ihany i Malala iny hariva iny sao hiverina hiantso i Ratrema nefa dia nangina ny finday, zary natory tsy nahatsiaro ny kiririoka fahiny intsony...Niverina tao an-tsainy ny fahiny, fony Ratrema tia azy, izy ilay saribakoly nampihantaina tao antokatranony. Tsy niakanjo afa-tsy izay avy any ampita ary tsy nivoaka ny trano raha tsy nihaingo. Fantany ankehitriny fa efa nivadika ny tantara ary izy no niala tao an-tokatranony...nefa mahatsiaro tena ho meloka izy nohon'ny nitondrany ny zanany hanalavitra ny rainy. Izy dahy izay tsy mendrika ny hijaly toa azy...fa zanak'olona manankarena!
Nony nahatsiaro izany izy dia tonga saina! teo izy vao namerina indray ny lasa tao andohany ary nahatsiarovany saina fa zanak'i Hery i Toky...i Cynthia indray dia araky ny échograpfie tamin'ireny no nikajiana azy hoe zanaky Ratrema, tsy hainy anefa izay tena marina...
Nandinika mafy teo ampitoerana teo izy dia tsaroany nihorohoro ny sainy... nanahy ireto zanany izy, izay mety halain-dRatrema raha mitohy izao fisarahana izao...kanefa mety tsy ho azon-dRatrema koa raha fantany ny marina rehetra! Vizana mafy ny sainy iny hariva iny ka resin-tory teo amin'ny sezalava tao amin'ny efitra fandraisam-bahiny izy. I Hery kosa no nanome sakafo sy nampandro ary nampatory an'izy dahy. Toy ny efa zatra sahady izy mikarakara an'ireto zaza.
Nidina izy avy eo ary nandrakotra an'i Malala izay efa resin-tory, nefa raha iny hamonjy tohatra hiakatra iny izy no niantso tampoka i Malala...
- "I Hery a! aza miakatra aloha fa avia eto fa misy tiako lazaina anao." - "Hay ianao tsy matory akory?" hoy i Hery nitehina teo amin'ny arofanin'ny tohatra...
- "An an! nakimpiko fotsiny ny masoko fa lasan'eritreritra aho," hoy i Malala niverina nipetraka..."Hery a, misy zavatra tiako ho fantatrao..."
- Momba ny inona?" hoy izy variana
- "i Cynthia!"
- "Maninona i Cynthia, marary?"
- " An, an...mbola tsy nampiasa ny sainao mihitsy ve hoe iza no rainy?"
- "fa.., fa angaha tsy Ratrema? tsy tiako hiverenana intsony ireny lasa ireny ka!" hoy i Hery andeha hitsangana indray. Nefa notazonin'i Malala ny tanany ka indro izy nipetraka tsy fidiny.
- "Hery a! misy itovizana amin'i tompokovavy mamanao anie izy io e!
- "Angaha?" hoy i Hery nanongilana ny lohany..."fa tsy azoko, fa ahoana e! fa angaha tsy hoe an-dRatrema io zaza io? tsy izany ve no resaka nandeha taloha ireny?"
- "Ie, ny kajin-dRadoko fotsiny no nilaza izany fa he ity zazakely, io hariva nampirina ny entan'i Mamanao iny aho no nahita ny sariny fony mbola zaza, dia i Cynthia napetraka!"
Tsy nandry loha i Hery fa lasa indray aloha nisava ireto baoritra nadoboka tao andakozia iny andro iny... efa natsikafona daholo indray izay voampirina vao hitany ilay fitoeran-tsary efa vasoky ny taona.
Navadibadiny haingana ary io tokoa! i Cynthia sa i Mama? tena mitovy hoy izy nisento lalina...
Te-hifaly izy hanakatra ny lanitra fa misy ihany sarivongana mety hahatsiarovany ny reniny, izay lasa tsy nialany nenina akory, sady amin'izay sary mandehandeha, zanany! tsy misy hiadina hevitra akory...mahagaga azy no tsy nahitany izany teo no ho eo hatramin'izay!
Te-hitomany indray izy satria efa an-dRatrema ireo zanany ireo izao. Raha halain-dRatrema ny zanany dia hiala maina izy...
- "Dia ahoana?" hoy i Hery nijery an'i Malala izay nangina tanteraka nandritr'izay minitra vitsy izay..."dia ahoana ry Malala?"
- "Asa ry Hery, fantatrao angamba izao no mampitebiteby ahy!"
- "Izaho koa matahotra," hoy izy nanainga ny tongotry Malala tsy hikasika ny gorodona...
Nifamihina teo izy roa ary lasa ho azy ny tanan'i Hery nanafosafo ny volon'i Malala...nosafoiny koa ny sorony, ny lamosiny ary i Malala kosa nisisika tsy nihetsika. toa maka tsirony ery amin'izato tanan'i Hery malandilandy mikasika ny vatany...Nihorirana kely izy ary notakariny tamin'ny molony ny molotry Hery izay tsy nandà fa nanome izay notadiaviny...oroka naharitra ela, toa nitondra fanantenana, toa midika fahatokisana, toa mampahery tampoka ilay saina niady mafy teo, ary koa mitory fitiavana...ilay fitiavana efa nitsilopy nezahina novonoina, hay tso-drivotra malefaka fotsiny dia nety hampidedaka azy indray.
Nifanatrika ry zareo avy eo, ary nakarin'i Hery moramora ny akanjo ambonin'i Malala. Natsotran'ity farany ny tanany roa hahamora ny hialan'ity tee-shirt naneritery ireo tratrany efa nivoitra be. Nopihin'i Hery avy tao andamosina ny tadin'ilay soutien nanafina ny tratrany. Nohararaotin'i Malala io paoziny io namahany ny bokotry ny lobany hampiseho ny vatany tanora sady nofosana...
Tsy nisy teny izany rehetra izany, tsy nisy eritreritra fa dia lasa tamin'izao...toa tsianjery fotsiny tany antsaina tany dia vetivety dia niala ireo akanjo nanelingelina azy roa.
Ilay lamba notafian'i Malala teo sisa no nisaronan'izy roa ary indreo ny vatany zary nofo iray indray, toa tsy hisaraka intsony fa hijanona ho toy izao mandrakizay...hadino izao rehetra izao, hadino ny manodidina rehetra fa ny fanahiny kosa efa tafakatra any ambony tsy hita maso any,
fa nofo roa samy nangetaheta mafy ilay firaisana niriany ho tanteraka tany anaty tany saingy tsy sahy navoaka fa nahamenatr'olona, kanjo nifanena tampoka teo amin'ny toerana mangina, tao antaty fotoana tsy nampoizina...ka mbola mety hisaraka ve?
Nony tonga tany ampiasana i Hery dia maika mihitsy nandrehitra ny solosaina hanoratany ho an'i Alexia. Ny fahatapatapahan'ny jiro alina matetika mantsy no tsy nahafahany namaly azy teo no eo.
Nihisatra velona tsy nisy ohatr'izany anefa ny famelona ity masinina, hany heriny nitsangana nandehandeha eran'ny trano nanangona ireo antontan-taratasy tonga avy any amin'ny paositra. Raha mbola variana nijery izay anjarany tamin'ireo valopy ireo izy dia indro i Haja niditra ny biraony velon-tsikitsiky tsy nisy ohatr'izany...
- "Ka ahoana Rahery lay rahariva a! lasa izao izany an?"
- "Raikitra ka!" hoy i Hery namaly azy...
- "Ary toa tsy falifaly ialahy? misy olana indray angaha ilay rahariva? tsy maninona ange leitsy raha hahemotra fa iaraha-mahalala ny mbola mahasahirana an'ialahy fa..."
- "An an, atao ilay rahariva ka!" hoy i Hery nanapaka azy, " saingy izao misy olana leitsy eo aminay mitsam ka..."
- "Hery a, aleo rahatoandro isika roalahy miara-misakafo dia tantarao ahy izay mahazo an'ialahy!"
- "Mety mihitsy izay," hoy i Hery nisento kely! "alaivo eto aho dia miaraka isika!"
Dia samy namonjy ny asany izy roalahy iny maraina iny. Nieritreritra teo i Hery dia naleony indray tsy nandefa hafatra satria fantany tsara fa tsy hampiova inoninona izay fampanantenana na fitoriana fitiavana mety hosoratany eo. Nikatroka namita ny asany izy iny maraina iny ary tamin'ny mitatao vovonana katroka dia tonga i Haja.
- "Ndao ary e!"
Nandray ny palitaony i Hery dia lasa izy roalahy nidina hivoaka ny toeram-piasana. Teny andalana i Hery dia nanomboka nitantara tamin'i Haja ny zavatra rehetra nitranga hatramin'izay. Toa an-tsianjery sisa no hanafaran'izy roalahy ny sakafony, ny famonjeny latabatra ary ny fihinanany. Ny resaka tsy nijanona mihitsy.
- "Dia izany leitsy no mitranga a! tsy afaka mihaona intsony izahay fa Ratrema eo foana...izay angamba no vita ry Haja, kanefa izahay leitsy mbola mifankatia ihany."
- "Hay ve leitsy? dia tsy mino aho leitsy hoe Ratrema iny no lasa ohatr'izany!" tena olona tsongoin'olom-bolo mihitsy leitsy izy iny sady ramorabe hatrizay niainany...nisy nahazo azy angamba leitsy fa tsy mino aho!"
- "Minoa ahy ialahy ho'aho fa ny masoko roa ireto no tena nahita azy! ny olako izao dia ataoko ahoana ny hahita ilay olon-tiako? izay nahazo an-dRatrema any, c'est le cadet de mes soucis raha tian'ialahy ho fantatra!"
- "Ka raha antsoina izy l'ty rahariva ho any amin'ny fetintsika?"
- "Te-ho-tapa-doha angaha aho amin'ialahy? he aza leitsy amin'ny andro atoandro, efa tsy azoko atao ny mahita azy, ary maika fa ny alina?"
- "Ka angaha ialahy no hiantso azy?"
- "Fa iza?"
- "I Vero leitsy a! hiaraka izahay mivady dia i Vero no maka azy ao an-tranony! sa ahoana?"
- "Dray!!!! iny indray no tsy noheveriko! mety hanao izany ve leitsy ialahy?"
- "F'angaha leitsy izany sarotra? antsoiko izao dia izao i Vero dia amin'izay izy tafahomana mialoha haka ahy eto. Ialahy kosa tonga dia modia mikarakara izay atao...sao misy tian'ialahy hoentina aloha?"
- "An an, izay indray aloha tsy misy olana e!"
- "Eny ary fa dia rahariva izany e! ndao indray aloha hanompo patirao kely, azon'ialahy angaha ny anjaran'ialahy tamin'i Sefo?
- "Hay, ilay solosaina ve?"
- "Oadray leitsy, tena tsara leitsy ilay izy a! sady mora ampiasaina...tsy mihainohaino intsony leitsy rehefa ao an-trano ko!"
- "Izany ho'aho, vita hatreo ny famadibadihana tele rehefa ratsy ny fandaharana! Hahaha"
- "Aza atao fantatr'i Sefo hoe zavatra hafa ange leitsy no tena ampiasantsika ity zavany fa asa angamba, hahaha!"
Nikakakaka nihomehy izy roalahy niditra niasa ,ary tsapan'i Hery fa maivamaivana ohatr'izany izy iny tolakandro iny...
Nitsikitsiky tsy nisy ohatr'izany i Vero nitsena ilay olon-tiany iny hariva iny. Faly loatra ny fony fa efa ela izy roa izay no tsy mba nivoaboaka namonjy fety, eny fa na dia nisakafo ivelan'ny trano aza dia efa tena tsy tsaroany intsony ny daty. Samy sempotry ny asany koa moa dia tena zara aza tonga ao an-trano hitsotsotra, hany ka tsy tsaroana intsony ireo fahafinaretana ilain'ny saina rehetra. Ny tena loza aza dia hatrizay andro vitsivitsy nahazoan'i Haja io solosaina azo lanjalanjaina io dia tsy hitany intsony ny tokatranony. Asa loatra izay manintona azy ao. Ny an'i vero moa dia efa tena leo ny masony mijery ireny tontonlon'ny andro ka fadiany mihitsy ny hariva ny manohy izany any an-trano.
- "Manimanitra ny vadiko izany androany hariva!" hoy i Haja nanoroka azy
- "Ka hiaraka aminao tsinona ko! sady raha mitondra vady daholo ny namanao, sao dia izaho no ratsy indrindra any!" hoy i Vero nananihany.
- "Mmmh! aza miteniteny foana moa" hoy i Haja nijery ny vadiny tamin'ny masom-boromailala...
- "Ndao voahy ny fiara ry Haja fa tsy eto amoron-dalana eto no hanao izay hahababo ahy a!!!"
- "Koa maninona? efa ela ange aho no tsy nisangisangy ohatr'izany e," hoy izy namoha ny varavarana ilany ary nampiditra ny olon-tiany tao anaty fiara, dia iny izy nihodina hamonjy ny toerany.
- "Ouffff," hoy i Vero tany an-tsainy! tena ohatry ny hafana izany anio alina izany an! dia niainga ry zareo. Teny andalana anefa dia raikitra ny resaka momba an'i alexia ka nikaroka izay hevitra mety hahomby hahazoan'ilay tovovavy hivoaka hanaraka azy ry zareo.
- "Mivavaha mafy tsy ho ato Ratrema," hoy i Haja nivavabavaka!
- "Fa angaha isika tadidiny? efa tamin'ny fetin'i Alexia taloha ela be iry ange isika no taty e! koa raha tsy inona izy ko hahatsiaro an'izany intsony! sady izaho irery anie no hiditra any e!"
- "Dia mahereza ary ko!" hoy i Haja nampahery, "tadidinao tsara ve izay tokony holazainao?"
- "Aza matahotra! na mpilalao sarimihetsika aza tsy mahay noho izaho!" hoy izy nanokatra ny boati-manjamasony hijery ny fitaratra keliny hanitsy ny tarehiny.
Nony tonga teo ambavahady dia nitsikilo kely aloha i Vero ary hitany ny fiaran-dRatrema fa efa teo. Natahotra kely ihany izy kanefa nahitsiny ny akanjony dia nampanenoiny ny kiririoka fanairana.
Poa toy izay dia nipoitra i Zefa.
- "Manao ahoana Tompoko? iza no tadiavinao azafady?"
- "Mitady an'i Alexia aho!" hoy i Vero nitsikitsiky.
Tonga dia novohan'i Zefa ny vavahady ary niditra i Vero. Akanjo lava mainty marara-tena no teny ankodiny ary ny vololavany navelany hiraraka manaraka ny lamosiny mitanjaka kely indreo ahofahofan'ny rivotra mitsoka hatreny antokontanindry Ratrema mianakavy. Toa lavitra dia lavitra ity lalana taminy noho ireto kiraro avo fanahy iniany nanaovana iny hariva iny noho izy hamonjy lanonana. Tsy noheveriny loatra manko ny handeha tongotra toy izao... raha izy lasam-binany naneninenina tsy nivatsy kapa iny, hay i Ratrema efa nijoro teo anoloany mandinika mafy azy hatrery alavitra ery...Ny tanany ampaosy, ny kibony somary narosony ary ny masony mijery dia mijery, toa azon'andriamby!
- "Manao ahoana ianao ry Mademoiselle.....iza moa?" hoy Ratrema nitsiky taminy sady nanamboamboatra molotra ery...
- "Manao ahoana ianao Tompoko! efa Madame aho ka! Vero no anarako!"
- "Hay! faly mahafantatra anao Madama, fa iza no tadiavinao?"
- "Mitady an'i Alexia aho Tompoko" hoy izy "...ianao no Papany?"
- "Ie, izaho no rainy, ary ianao?"
- "Namany aho, namany taloha elabe saingy nandeha kely tany ivelany aho ka efa ela izahay roa no tsy nifankahita. Sendra mandalo eto antanindrazana aho izao ka niezaka ny niantso azy kanefa tsy mandeha intsony angamba ny findainy ka naleoko tonga aty haka azy fa hanao fety aho rahariva, sa tsy azo atao?" hoy i Vero mody nihakanakana
- "Hay! mandrosoa aza ianao ry ...Vero moa? mandrosoa fa ampanantsoiko izy..."
I Alexia anefa nandritr'io fotoana io dia teny andavarangana ary naheno tamin'ny antsipirihiny izay resaka nataondry zareo.
- "Inona no hosotroin'i Vero?" hoy Ratrema nikoropaka naka vera sy niantso ny mpanampiny hiantso anjanany vavy.
- "Aoka izao Tompoko," hoy izy nisakana an-dRatrema...tsy ho afaka hijanona ela aho fa ny vadiko miandry ahy ao ivelany ka sao dia ela loatra aho!
nitebiteby anefa izy sao ity i Alexia tsy hahazo resaka ka ho potika eo ity tetika efa natao tsianjery maimbo...ho afa-baraka eto marina! hoy izy namihina mafy ny poketrany...
Ny mason-dRatrema dia tsy niala teny amin'i Vero mihitsy na indray mipika aza, hany ka tsy hitany akory ny fijaikojaikon'i Alexia niditra ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny py maso lavareny nataony an'i Vero hilazany ankolaka fa efa takany ny tiany hambara...
- "I Vero!" hoy izy mody nihazakazaka sady nanoroka ity farany...
- "Alexia!" hoy izy roa nifamihina mafy...
Raha mody nikiakiaka i Alexia nifalifaly tsy nety nijanona dia nanararaotra ny tabataba nataony i Vero nibitsika teo ampotontsofiny fa lalaovy hatramin'ny farany ny teatra...
- "Ka ahoana? ela be izay, taiza marina indry ty e?" hoy i Alexia
- "Tany Frantsa aho akia, dia nanambady tany! hoy i Vero, fa tonga eto izahay dia nahatsiaro andry dia izao..."
- "Faly be aho!" hoy i Alexia nihinjaka kely mihitsy...
- "Nandramako nantsoina indry hatry ny maraina tsy mamaly sa efa niova numéro?"
- "Na izaho koa aza," hoy Ratrema nitsatsaingoka tsy mety mahazo azy tato ho ato!!!"
- "Ndana reitsy miomana indry fa dia asaindry zareo indry rahariva! mandehana mihitsy aloha manova saina kely fa tena hatsatra kely mihitsy! mandehana miakatra haingana!"
Lasa nihazakazaka toy ny tadio Razazavavy niomana.
Tsy andrin-dRatrema izay hidifian'i Alexia hanohizany ny resany amin'i Vero...
- "Ka aiza ianareo no mamantana izany izao?"
- "Any amin'ny rafozako izahay izao," hoy izy niondrika tsy te-haneho hoe mandainga.
- "Hafiriana ianareo no eto?"
- "Iray volana ihany ka," hoy i Vero nitsangana nialaala satria hitany manindry azy mafy ny mason-dRatrema.
Nipoitra ihany i Alexia ary nofihininy ny tanan'i Vero...
- Amin'ny firy no vita ny fetinareo?"
- "Asa," hoy i Vero nijery famantaranandro..." tsy misy lera," hoy izy nijery nahitsy andRatrema...
Tsaroan-dRatrema fanina kely ny masony nijery ity vehivavy izy... eny ary, vehivavy lehibe ianao anaka ka matoky anao aho...na amin'ny firy ianao no hody na amin'ny firy dia tsy maninona..."sa alaiko any? aiza moa ianareo no handeha?"
- "Any Ivato ny rafozako no mipetraka," hoy i Vero fa lavitra loatra ny lalana ka aleo ihany izahay no hanatitra azy... "Lasa ary izahay fa veloma tompoko."
Toy ny voan'ody Ratrema fa dia tsy nanankalahatra mihitsy teo anoloan'i Vero. Nitsoriaka toy ny mpangalatra izy roa vavy nivoaka tao...
- "Moramora ry Alex," hoy izy fa avo be ny kiraroko ka tsy zatra aho sady toran'ny hehy izy.
- "Fa taiza indray no nahitanareo hevitra sahala amin'izany e?"
- "Anontanio i Haja!!!"
- "Ary inona no noresahin'i Papa taminao teo?"
- "Enquêtes be tsy nisy ohatr'izany, saika hibaradaka aho!!!"
- "Ary ho aiza isika e? toa mihaingo be ity i Vero? izaho koa voatery nanao akanjo tsara fa sao dia tratran'i Papa hoe tsy miady ny baolina!!! mbola tsy nandainga taminy aho raha tsy androany!"
- "Ndao ry alex fa hifety isika a!!! ndao!"
Efa hendratra ery i Haja tao anaty fiara vao nipoitra izy roa vavy. Nanahy be ihany izay mety fandehan-javatra tao anaty villa be tao izy ka nila ho gila mihitsy ny masony nivezivezy nitsipalotra teny amin'ireo retroviseurs rehetra.
Mbola nihomehy ihany anefa i Vero sy Alexia niditra tao anaty fiara. Poa tsy teo dia namelona ny motera i Haja ary nimaona niridana.
- "Mba moramora re ianao ry Haja fa inona ary ity mandeha mafy ity? ohatry ny mandositra!"
- "Ka ianareo roa aza nihazakazaka ery namonjy ahy ko! ka nanao ahoana?"
- "Eee, nilamina iny aloha, ny fety indray izao eritreretina." Hoy i Vero namihina ny sandrim-badiny.
- "Fa fety inona?" hoy i Alexia gaga...""f'angaha tena misy ilay fety e?
- "Oadray, andao ianao manaraka anay dia aza be resaka intsony! avoahy ny manjamaso dia ataovy manja be mihitsy fa sao tsy tian'ny akamako intsony eo..."
- "I Hery ve? aiza i Hery?" hoy i Alexia nihoraka
- "Any aminy izy ka! ho any isika izao fa milamina aloha ianareo roa vavy fa tsy concentré mihitsy aho mitondra fiara!"
Vetivety izy ireo dia tonga teo anoloan'ny tranon'i Hery. Efa manakoako hatrany ivelany ny hirahira sy ny fihomehezana.
- "Ary efa be olona be ato izany an!" hoy i Haja nitringatringa nijery tety ivelan'ny tamboho..."andao tarito ny lalana ry Alexia fa ianareo anie no tompon-trano e!"
Dia niditra izy telo mianadahy ary inty i Hery efa nijoro teo ambaravarana mitsena andry zareo.
Oroka lavareny ny azy roa teo, ary toy ny tsy nisy ry haja mivady...
- "E e e!" hoy i Haja sady nikohokohoka kely izy... "tsy aleo izahay aloha hiditra vao manohy indray ianareo?"
- "Manao ahoana i Vero! adray azafady ry ireto!" hoy i Hery nihomehy sady nandray tanana an'i Vero izy. "Ialahy ry Haja efa hitako tontolon'ny andro fa ndana miditra a!"
- "Andao ry Vero sao dia tazoniny ho azy eo koa ianao a!" hoy i Haja nananihany.
Niditra daholo izy efatra ary hay efa tonga teo daholo ry Andry sy Niry ary i Fidy sy Hanitra namandry zareo anisan'ny tratra antso ho avy io hariva io.
Nony vita ny présentation dia samy naka ny toerany ry zareo. Kelikely ihany moa ny efitrano kanefa dia nezahin'i Hery nahisaka daholo ny entana hampisy malalaka teo ampovoany hahafahana mandihindihy.
- "Sao misy hanampiana an'i Hery?" hoy i Alexia nitsangana nankany andakozia maika hiresaka amin'ny olon-tiany sady te-hamantatra bebe kokoa ny anton'ity fety ity.
- "Raha manaiky hifamihina amiko androany alina tontolo dia mahazo mijanona eto," hoy izy nitsiky malefaka.
- "Izay fotsiny?"
- "an an tsy izay fotsiny, dia manaiky hiara-mandihy amiko irery, sy....
- "Sy inona koa?" hoy i Alex nangata-maso be tsy nisy ohatr'izany...
- "MMMhhh! sy sy ahoana re no ilazako azy e? sy mmmhh mannaikkky hijannnona aty amiko rehefa lasa ireo olona manelingelina antsika ireeeeo?"
- "Dia hanao inona isika?" hoy ihany Alexia niandrandra ny molony teo ambany saokany.
- "MMhh, dia holazaiko eto ve? manjary lany tsiro sahady!!!" hoy i Hery nihomehy kely.
- "Entrée fotsiny no ilaiko ka!" hoy i Alexia nanoroka azy fa tsy nahandry intsony.
Niditra tampoka anefa i Haja hamoaka izay tavoahangy vitsivitsy novatsiany avy any...
- "Oadray, azafady fa mbola manelingelina indray aho" hoy izy mody tsy nahita.
- "F'ialahy ity leitsy toa ho problème ko androany alina koa!" hoy i Hery mody tezitra sady nandray ny plateau misy ireo voanjo sy sambosa. "Ary inona ity nentin'ialahy? efa ampy leitsy izay nomanikoa ato a!"
- "An an! fomban'ny gasy ny mitondra kely," hoy izy nihomehy, "sady mahakamo leitsy ny hitady mpivarotra indray rahalina raha tsy ampy a!"
Dia niverina tao amin'ny salon izy telo ary raikitra ny la mozika sy ny dihy isan-karazany. I Alexia sy Hery dia toy ireny mpivady vao ireny mihitsy fa mifamikotra mafy na mandihy na eo ambony seza.
Izy efatra mianadahy vahiny koa variana mihirahira sy mitendry gitara hany ka nahafinaritra dia nahafinaritra ny lanonana.
I Vero sy Haja kosa mitakoritsika ery anjoron-trano... tsy miady anefa na mifanazava fa mifantoka amina resaka hafa mihitsy...
- "Dia nanao inona anao marina izany Ratrema izany?" hoy i Haja nisikotra ambadiny.
- "Efa hoe ohatry ny mikoty mihitsy izy ry Haja," hoy i vero nanamafy izay efa nolazainy teo aloha...manadihady, manao fijery hafahafa...ohatry ny niboridana mihitsy aho ho'aho teo anatrehany! noheveriko fa mivaha ho azy mihitsy aza ny akanjoko!"
- "Dia variana mihitsy aho amin'izany ry Vero ka! vao aninkeheo i Hery no nitantara tamiko ny fiovan'ny toetran-dRatrema nefa dia tsy ninoako, fa ianao mitantara ity he manamafy izay nolazainy. Fa dia naninona loatra aza izy iny?"
- "Asa, mahatsiravina ahy ny olona toy ireny!" hoy i Vero tohina. " Mampalahelo ahy izay vadiny. He ity zanany gadrainy ao an-trano fotsiny nefa ny hadalany miharihary. Matim-behivavy!"
- "Marina ny anao" hoy i Haja nandray ny verany amin'izay.
- "Tena tiako hofaizina kely izany!" hoy i Vero mbola nanohy ihany...
- "Maninona? faizinao ahoana?"
- "Mbola mieritreritra kely aho..."
- "Aoka itsy ry Vero fa olona mahitahita ireny fa sao ianao tsy mahafaty biby eo ka ny rambony no tsy ho tanty! ary andao handihy fa efa ela loatra isika no nitokatokana teto... "
Nandihy slow nilamindamina izy roa ary nifamihina mafy. Ny sain'i Vero amin'io eo ampiheverana izay tetika maty paika hanafaizana an-dRatrema indray.
Nitohy ny fisotroana ary efa nanomboka nadeha ny rediredy isan-karazany. Efa mihohoka matory fotsiny i Andry sy Fidy hany ka sahirana ery izy roa vavy sakaizany avy iankinandry zareo. I Vero sy Haja mbola mitohy mihirahira sy mandihy teo afovoantrano, toy ny manenjika ireo fotoana laniny tsy mba nivoahany tato ho ato. Nifehy tena koa i Haja tsy hisotro loatra satria mbola hitondra fiara ary izy no mbola hanatitra an'i Alexia rehefa avy eo.
I Alexia sy Hery anefa indro nijaikojaiko niakatra tany ambony rihana, hanohy ny fety araky ny efa nikasan'i Hery azy. I haja sy Vero etsy mandihindihy sy mihirahira, misarika mafy ny sain’izay mbola tsy reraka any amin’izy ireo, handehanan’ireto vorona ankiroa mifankatia mba tsy hisy mpahita fa hikopaka elatra any ambony any.
Jiro teo an-doham-pandrianan'i Hery no hany nanazava ilay efitranony. Nohidian'i Hery avy hatrany ny varavarana. Nahatsiarovan’izy ireo ilay voaloham-pifankahalalàny ilay hazavana mitsilopilopy tao an’efitra.
Nifampiresaka izy roa :
- "Hery an ! nalahelo mafy anao aho.."
- "Izaho koa Alexia an ! mifona aminao mihitsy aho fa tena loza ity hadalako, ny fanomezana saro-bidy taminao no natolotrao ahy, nefa toa hadinoko tante…"
Nosakanan’i Alexia tsy hahaloaka ilay teny farany i Hery fa ny fanondrony no natohony teo amin’ny molony. Nanatona ny molotr’i Hery izy dia nifanoroka aok’izany. Niverina indray ilay fantsom-pitiavana nifanaovan’izy ireo tany Ambatofotsy. Tahaka ny hoe efa an-tanonany maro tsy nifankahitàna ireto olon-droa, ka pitik’afo kely monja dia ampy hampiredareda indray ilay afom-pitiavany nitambolonan’ny setroka matevina teo.
Poa toa izay dia nidaboka teo am-pandriana izy roa, maika ery nanala izay akanjo rehetra teny aminy, nifampikofokofoka tsy misy aok’izany ary tsy ela dia nihatakataka teny amin'ny sisim-pandriana ireo akanjony rehetra. Niakatra nipetraka teo ambony fen’i Hery i Alexia nony avy eo sady nihondrikondrika nanoroka ny tratrany. Niakatra moramora izy avy eo sady manafosafo indray ny tarehin’ity malalany. Novonoiny ny jiro ary dia nihanoka tao anatin'ny fahafinaretana tateraka izy roa. Efa ho amin’ny 2 ora maraina vao injay re ny varavarana nivoha, ny ao ambany efa mangina fa tena reraka tokoa angamba na i Haja sy Vero na ireo namana hafa.
Indreny olon-droa mijaikojaiko moramora mamonjy ny efitra fandroana. I Hery mitrotro an’i Alexia io, niditra ilay efitra, mbola mitohy ny orokoroka, niandry elalela kely, dia injay fa re ny fisasasasan’ny ny rano. Indro izy roa miara-mandro, mifamihina ery tondrahan’ny rano matimaty manala ny hatsembohana eny aminy. Tahaka ny nofo iray toa tsy te hisaraka mihitsy. Nifanaovany ny kosokosoka madinidinika amin’ny vatan’ny tsirairay. Vita izay dia, najanon’i Hery ny rano mikoriana, nosintoniny ilay lamba lehibe fifafàna, indro fa nikirazorazo ilay lamba fotsy iray, toa misy aloka mainty kely ao anatiny, ary misy tady kely mainty somary nivoaka teo amin’ny sisiny. Teo vao nikoropaka i Hery, ilay lamba famafàna amin’io efa anamainan’i Alexia ny vatany feno piti-drano madinika. Hendratrendratra ny anao lahy. Loza ity, tena maty harika mihitsy ialahy ity ry Hery, ahoana no hanafenako ity?
Nosintoniny ilay lamba fotsy nanarona teo, nataony haingana mba tsy ho hitan’ity malalany. Niezaka ny hamoriporitra iny dia hatsipiny eny an-jorontrano. Tsy tratra fa teo am-pisintomana azy no latsaka ilay atin’akanjo mitaditady kely.
Somary niondrika i Alexia, nijery ilay string mainty, taitra tampoka.
- "Hery an ! inona ity?"
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 2:: Hametraka hevitra (3) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
Dia izay ilay voalohany nisantarako ny firaisana tamin’i Alexia, lozako raha manadino izay aho, natolony ahy ny tenany iray manontolo, nefa nolotoiko ny fitiavako, teo i Malala, izay namela takaitra tsy azo fafàna, dia izao indray ity Tahiana, tsy hahay hamela ny hadisoako mihitsy aho raha izay . . .
Aiza anefa izao i Alexia? Dia nanetsetra teo i Hery. Latsaka tamin’ny tany ilay sary misy ny malalany dia niondrika tao ambany fandriana izy, kanjo hitany tao ilay kitapo iray izay tsy dia fitondrany matetika.
Nosarihany dia nosokafany. Antontan-taratasy maromaro no tao, nesoriny, indro fa hitany teo ilay fanomezana mifono mangirana nomen’i Alexia azy ny alatsinainy hariva teo.
- Oadray, tena loza, tena looozzzzaa ! Ity no tena hadinoko tanteraka, tena tsy tao an-tsaiko noho ny fifamahoan-javatra tato anatiko. Adala mihitsy ialahy ry Hery. Tena tsy misaina, inona no ato?
Nosokafany, hay famataran’ora lafo vidy no tao, ireny marika malaza ireny.
Nisento tokana ity tovolahy, nanenina ity hadalany, tsaroany tamin’izay fa somary nisintona ny tanany roa i Alexia ilay tany am-piasàna ny talata maraina, tahaka ny hoe : misy zavatra tiany hojerena tao.
Tsikariny fa tsy novahako akory ity fanomezana ity, loza izany ; inona indray ity no hataoko. Ny andro efa tena alina.
Tena ataoko ambanin-javatra ilay malalako fa i Malalatiana indray no nahasomokitra ahy.
Tena very hevitra i Hery. Tsy nahita tory ny alin’iny fa nisaintsaina izay tokony hataony.
Famataran’ora tsara tarehy, marika malaza, lafo vidy : misy dikany manokana ity, hoy i Hery tsy nahateny. Nisy fotoana efa nilazan’i Alexia tamiko fa ny vola izay azony amin’ny tambim-pahasasarany rehetra, mikasika ilay fizaran’asany voalohany dia hatolony ho fanomezana ho ahy. Ary efa ela no nieritreretany mikasika ilay izy ka ampiany amin’ny tahiriny manokana raha tsy ampy ahazoany azy.
Somary sangisangy no nilazany izay. Izaho koa toa tsy dia niraharaha loatra. Inona tokoa moa, zanaky ny manan-katao izy ka zara raha iray ampahafolon’ny mandalo eo aminy izany, nefa...
Tambim-pahasasaran’i Alexia voalohany ity natolony ahy ity. Izany hadalako, dia tena maty harika, tsy nahatsiaro akory fa noheveriko ho zavatra tsy misy lanjany ity baoritra kely mifono mangirana ity. Hany ka ilay fatin-tsilipo nomen’i Malala indray no nataoko ambony.
Tena isaky ny misy masoandro mibaliaka izany amin’ny fiainako sy Alexia dia indro Ramatoa Malalatiana miaraka amin’ireto zanako mianadahy kely mitondra rahona sy zavona manakona ny lalanay, ary mandrakotra haizina sy oram-baratra mampitampify anay anaty orana?
Izao mahazo ahy izao mihitsy ilay ataon'ny olona hoe ny nenina tsy eo aloha hananatra, fa aoriana handatsa. Raha izay tokoa aho mantsy no nandà an’i Malala tamin’iny voalohany iny, dia tsy tahaka izao ny mahazo ahy.
Nipitrapitra teo ambony fandriana teo izy. Ny valin-drihana no nobanjininy mafy. Tsaroany tampoka ny fahabangan'ny reniny izay efa vovoka izay mba hany fitantarany ny fahoriany. Izao izy irery no ao an-trano, ny olon-tiana nantenaina tsy afaka ifandraisana akory, ka inona no hatao? Raha teo akaikiny tokoa matsy ilay malalany dia tsy tahaka izao mihitsy izy.
Te-hatory mafy izy noho ity fahoriana miampy adin-tsaina vaovao mianjady aminy. Efa reny vizana ny tenany nefa ny lohany tsy mitsahatra ny mihevitra izay tokony hataony.
Tampoka, niarina izy dia nanokatra ilay kitapo misy ny solosainy, natsofony ilay fitaovana mampifandray ilay vatakely tamin’izao tontolo izao, dia nikasa handefa hafatra tamin’i Alexia izy :
Tsy hitany anefa izay hosoratana, naveziveziny teo ilay tsipika kely, sokafana izao karazan-dahatsoratra hangalàna hevitra izao, tsy nahita hosoratana izay voasoratra nofafàna fa tsy nahafa-po. Najanony aloha ny fifandraisana ; dia nidina tany ambany izy nisotro rano. Vao tafaverina teo izy dia nahagaga, fa toa naniry tao aminy ny aingam-panahy hanoratra ka izao no vetsovetsony:
Raha nandinika aho ny andro sy ny taona rehetra niainako,
Dia tsaroako fa ianao, no hany tokim-pitarainako.
Eto aho vao mahatsiaro fa ny androko hatrizay
Dia tsy nafoiko ho anao akory, fa nataoko alasafay.
Diso aho hatramin’izay, eny tena diso koa !
Ka ny fitarainanay dia mba henoy tokoa.
Ampio aho mba hijery, ilay fitiavanao madio
Aza avela hanirery, fa ny hafatro valio.
Eto aho vao mahatsapa, izato fanomezanao,
Fisaorana tsy ho voafafa no atolotro anao.
Miala tsiny re ry aiko, fa izao vao nahatsiaro
Fa torovana ny saiko, noho ireo adiny efa maro.
Koa veloma sy masìna, izany havako izany
Veloma fa ny faniriana, dia ny hahita anao hatrany ;
Ka ny tsy ampy hamenoako ny fiainako amin’izao
Dia tsy inona rahavako fa ny ho eo anilanao !
Nitsiky sy nisento izy raha vao nanoratra ilay fehezan-teny farany, tsy hay intsony na aingam-panahy avy aiza no nahavitany izany fa toa endrika hafa mihitsy no nivoaka tamin’i Hery. Naveriny indray ilay fifandraisana dia nalefany ho an’i Alexia ity tononkalo mahafinaritra ity. Tsy tsaroany akory fa efa amin’ny iray ora sy sasany maraina tamin'io fa sento sy tsiky no nandehanany natory, manantena ny hahita ity malalany any anaty nofiny mahafinaritra any.
Efa mazava ny andro vao taitra i Hery, nosokafany ny varavaran-kely, injany feom-boronkely mahafinaritra misiotsioka ery manainga anao fa andro mahafinaritra ny anio. Toa lasam-borona ny anao lahy, asa, mieritreritra lalina izay fandraisan’i Alexia ilay hafany omaly, na vao maraina, teo koa angamba izy. Naleony aloha tsy nelingelina amin’ny antso samihafa fa aleony mihitsy ny antson’i Alexia no hiraondraona voalohany na amin’ny finday na amin’ny antso an-tariby.
Kanefa, vita omana hiasa ihany izy, tsy mbola nisy aloha, mety mbola tsy nanokatra ny solosainy akory angamba ilay mamin’ny fony.
Tonga tany am-piasany izy afaka ora iray, tsaroany tampoka i Tiana, ilay nampahatsiaro azy fa mety misy fisaorana tsy nataony an’ity malalany. Asa tokoa fa nanana fahatokiana be an’ity mifandray aminy vaovao ity i Hery, nalefany ny hafatra voalohany araka ilay efa noresahina omaly, kelikely, injay fa namaly ;
Hery :-Manao ahoana i Tiana, tena misaotra be dia be !
Tiana :-Manao ahoana i Hery, misaotra noho ny inona ?
Hery :-soa fa teo ianao mampahatsiahy ahy ny tokony hataoko, tena nisy zavatra adinoko tokoa fa nanome fanomezana ahy izy talohan’ilay disadisa tao an-tranon-dry zareo ny alatsinainy teo, fa tena hadinoko.
Tiana :-Marina ve, Dia inona ilay izy ? Sao dia zavatra sarobidy.
Hery :-eny tokoa, fa ahoana ?
Tiana :-izay ary ilay efa nampoiziko !
Hery :- ???????
Tiana :-Dia inona no nataonao ? Efa nilaza taminao aho fa misy vehivavy sasany, tsy izy rehetra akory, rehefa manome fanomezana dia tena ataony amin’ny fony tanteraka kanefa tahaka ny tsy noraharahianao akory. Alatsinainy, tsy androany ve vao tsaroanao. Adala mihitsy ianao ity !
Hery :-Tsia an, omaly alina !
Tiana :-ka na androany na omaly, efa tara be foana. Dia inona izao no ataonao ?
Hery :-Efa nisaotra sy nifona taminy aho tamin’ny hafatra nalefako.
Tiana :-hafatra tahaka ny inona, mba avereno soratana eto hoe :
Hery :-Tsy tiako holazaina fa tiako ho anay irery !
Tiana TP !
Hery TP ahoana ? Tsy azoko !
Tiana :-Miangavy re ! izay no dikany.
Hery :-Tononkalo ilay izy, sady lasa tsianjeriko aza !
Tiana :-avereno soratana eto ary e !
Dia naverin’i Hery teo indray ilay tononkalo efa zary raikitra ao anaty masony. Vita izay dia hoy i tiana :
Tiana :- Oh ! tena tsara, tena miaiky aho. Raha mba ho ahy no anaovana tononkalo tahaka izao !Fa tena ianao ve aloha no nanoratra io e !
Hery :-Tena izaho fa tsy haiko mihitsy, ohatran’ny hoe : nisy hery hafa izany nanosika ny saiko hahavita io ! Dia ahoana, antsoiko ve i A. efa tsy andriko mihitsy ny haheno ny feony !
Tiana :-Aza maika aloha, sao mbola tsy hitany ny hafatrao dia hibitaka tsy afa-tavony eo ka vao mainka hisy fiantraikany ratsy. Aleo izy no hiantso na hitady anao. Tadidio fa ny fitiavana dia mahari-po hoy ny ao amin’ny Baiboly.
Izay fa lava loatra ny resaka. Azonao andefasana ny hafatrao ihany aho raha misy fiovàna. Veloma ry poety.
Nitsiky kely fotsiny i Hery dia nanomboka nandray ny asany efa mitobizika fa faran’ny volana ity andro. Mbola eo ihany koa ilay revy be omanin-dry zalahy rahariva.
Kanefa tsy mba niantso azy mihitsy i Alexia ny tontolo andron’iny. Toa zary niverina tamin’i Hery indray ilay fahanginany hatry ny alina teo.
Dia nihainohaino teo i Hery iny tontolon'ny andro iny, tsy hafatra, tsy antso antariby voarainy...tsy sahy miantso anefa satria matahotry ny mety ho fandraisan'i Alexia izay andro vitsivitsy tsy nandrenesany inoninona izay, indrindra ilay fisaorana, zavatra bitika indrindra amin'ny fahaiza-miaina. Ataony ahoana moa no hiteny hoe omaly anie ity fanomezana nomenao ahy iny vao nosokafako... Nandeha nody nijaingijaingy izy nony hariva ny andro. Teny andalana dia reny mangidihidy azy ny tongony te-hivily lalana hijery ny olon-tiany any an-tranony, nefa matahotry ny hihaona amin'i Malalatiana indray izy dia naleony nanamboatra saina. Raha izy handeha handray fiarampitanterana iny no injay avy tao aorianany nisy kiririoka naneno, niherika izy ka indro ny fiaran'i Malala no teo...May toy ny nodoran'ny afo i Hery! kaody tsy nisy ohatr'izany izy, nefa koa toa nitambolona tao anatiny tany amin'ny lalina indrindra ilay fahatsiarovana... "dia mbola resy indray ve ialahy ry Hery" hoy ny feon'ny fieritreretany...
Raha mbola nisalasala teo izy dia indro nipoitra avy any ny fiarabe mpitatitra. Tsy niherika intsony i Hery fa ny lalana nody no nasiany olona..."ao ivohoko ianao ry Satana" hoy izy sady niditra ity fiaram-bahoaka hitondra azy mody.
Teo ampamohana vavahady dia gaga izy nahita valopy kely nisisika niloko mavokely. Tsy nisy soratra afa-tsy hoe "Hery" teo ivelany. "mbola i Malalatiana sy ny hadalany indray izao ity" hoy izy nanipy ilay valopy teny antokotany. Niditra ny trano izy, ary niomana ny hahandro sakafo. Injay fa latsaka ny orana tany ivelany tany...nilatsaka koa ny ranomason'i Hery. Niverina tao an-tsainy ny reniny. "Toy izao izy miandry ahy isan-kariva", niverina tao an-tsainy koa i Alexia sy ny fitiavany...Nigogogogo mafy izy sady nikiaka hoe" Andriamanitro o, fa naninona re aho no dia lasa toy izao e! ny olona rehetra tokony hotiaviko tsy haiko ny mitia azy, ary ny an'ny hafa haiko ny maka ny fony!!!".
Raha mbola jenjina iny ny masony dia injay naneno tany ampaosiny tany ny telefoniny... "allo? allo? ary tsy misy mamaly?". Tena mbola ikala Malala iny indray angamba izany!
Iny i Hery dia natsipiny tao anaty fanasana vilia ny lapoaly saika hanendasany atody. Nalain-komana tampoka izy...Isan-kariva izy izao dia tsy misakafo, hitany miha-mahia ny tenany fa tsy amakiany loha. "izao angamba ny valin'asako" hoy izy.
Injany nikotrokotroka ny orambaratra, nidobodoboka koa ny fony, te-hiantso an'i alexia. Tapaka koa ny jiro, maizina ny manodidina. Tsy hitany ny labozia. Lasa izy niakatra moramora nitsidaikadaika ho any anefitra. Noraisiny tany ampaosiny ny telefonina ary nosokafany nataony solonjiro...sendra nitopy tao ny masony no nahita soratra izy: "1 sms vaovao" no soratra hitany teo, Antsianjery fotsiny no nanokafany ilay hafatra fa ny fony tsy ao akory, i Malala angamba ity, hoy izy
"Hery, voarainao ve ny taratasiko? Alexia"
Taratasy inona? hoy izy tafatsangana...Efa voavaliny tany andohany tany nandritr'izy nametraka ilay fanontaniana ny valiny...ilay taratasy mavokely...lozako lozako marina!!! hoy izy sady novelesiny indray ny lohany tamin'ny alalan'ilay telefonina tsy manan-tsiny...nihazakazaka izy nidina ny tohatra, mbola tsy niverina koa ny jiro ary ny orana mitohy mikija. Novohainy ny varavarana ary nifofofofo ny rivotra...nivoaka ihany anefa izy ary niraparapa tao anaty aizina, nandady eran'ny tokotany. Teny ampitadiavana teny izy vao tonga saina hoe mety ery anjorony ery izay ilay valopy satria raha nofahon'ny riaka ilay izy dia nentiny any ....amin'ny....d a l l e!
Dalle! dalle! soa fa misy makarakara ny dalle! mbola voatsapany tao ilay taratasy mifangaro amin'ny bozaka sy ny ahi-dratsy tsy voasariky ny rano...norohany tao anaty aizina ilay valopy efa tena hotsaka tsy nisy ohatr'izany. Faly anefa ny fony satria ao anatin'io valopy io ny hafatry ny olon-tiany...niditry ny trano izy ary niverina koa ny jiro...
Indrisy anefa fa tena nalemilemy be ilay valopy na dia tsapany aza fa toa taratasy matevina no tao anatiny."carte"angamba no ao! hoy izy kanefa tsy nosokafany aloha. "avela ho maimaina vao hokitihina"...
Lasa izy niakatra tany ambony ary nokarohiny tao ny entan-dreniny. Tsaroany fa nanana fanamainambolo izay i Ramihary fony fahavelony..."Mama! ampio aho amin'ity indray mitoraka ity" hoy izy niteny irery.
Nidina haingana izy ary natsatony ity fitaovana kely. Notsofiny moramora ilay valopy ary naveziveziny teo. Maika dia maika mihitsy izy, ny masony eny amin'ny famataran'andro...efa misasaka ny alina, mbola mihamikija ny orana...
Indro fa maina ilay valopy kely ary noezahiny nosokafana...Niraikitra ilay taratasy tao anatiny ary nony nosokafana dia rovitra, kanefa azo novakiana ihany ny soratra tao....
Efa hatry ny fony mbola zaza ny foko no nitia anao
Ary mbola tia anao izy izay hatramin'izao
Tsy niova aho fa mbola toy ny taloha ihany
Ianao no hany tokana ilay safidiko eto an-tany
Na nisy aza onja mafy saika handrendrika antsika
Dia nataoko izay hahatody ny fitia hatreny ampita
Notampenako ny masoko, fa ny foko no niteny
Ka na mafy tamiko aza, nekeko ireny rehetra ireny
Isaorako ianao nahatsiaro ahy ihany ry Hery
Satria ny fitiavanao tsy azoko natao an-kery
Izao aho vao tena sambatra fa tafaray ihany isika
Ilay masoandron'ny fiainako he baliaka dia baliaka
# Posted by tadiompitiavana :: FIZARANA 2:: Hametraka hevitra (2) :: Rohy maharitra :: Verindrohy (trackback) (0)
Nihomehy fotsiny ilay rangahy, nosokafany, hay solosaina ireny azo entina manaraka anao amin'izay alehanao ireny no tao. Faly ery i Hery nahita ilay izy. Tena mbola vaovao izy izany ary an-tapitrisa ariary no vidin'izy ity hoy izy tany antsainy tany.
- "Misy teknisiana ampanarahiko anao izao hanazava aminao ny ifandraisan’ity solosaina ity amin’ny orinasa. Iny izy iny efa vonona rahateo. Manam-bintana ianao rangahy an! Manao sonia eto ianao dia asiana anarana sy ny laharanao atao am-piasàna."
Tsy vintana anefa ny azy fa tena ilainy amin’ny asany io solosaina io. Izy mantsy no mitantana ny fikajiana ny resaka ara-bola amin’ny orinasa iray manontolo. Efa manana solosaina tokoa izy ao amin’ny biraony fa tena vao maika hanampy be azy ny fahafahany mitondra ity solosaina ity manaraka azy mody rehefa misy asa ilaina maika. Hafaliana ny azy ka somary nandihindihy kely mihitsy izy niditra ny biraony. Novelomina avy eo dia natsatoka ny karazana tariby fifandraisana.
Toa nanarina ny alahelon’i hery tampoka teo ity solosaina ity, satria azony entina mody any antrano.
Vita izay rehetra izay dia niditra tamin’ny tranon-kala i Hery, nosokafany ny mailaka dia nanoratra ho an’ity malalany izy, nitory fitiavana, nanontany raha voaray ny hafatra.
Hay efa tonga dia misy ilay fifandraisana haingana (Messenger) ilay solosaina vaovao ka dia nampidiriny ny adiresiny ary dia nandefa mailaka tany amin’i Tiana izy ;
Tampotampoka teo, nivaly ; vetivety kosa izany an !
Hery : Manao ahoana ianao ?
Tiana: Salama fa ianao no manao ahoana?
Nanazava izay fandehan-javatra teo i Hery, ny momba ilay disadisa tamin’ny alatsinainy, ny momba an’i Alexia tsy mandray antso hatramin’izao. Namaritra izay anarana izy ireo ka R :Ratrema, M : Malalatiana, A : Alexia ary Hery ny tenany.
Hery : -Tsy azoko antso mihitsy i A hatramin’izao, alefako avokoa izay karazana fifandraisana rehetra, mailaka, antso an-tariby, finday fa tsy mahazo azy foana.
Tiana: Sao dia nisy zavatra nahatohina ny fony taminao?
Hery : Efa nifona taminy aho, fa mbola tsy namaly izy hatramin’izao ;
Tiana : Manana solosaina ve izy ao an-tranony ?
Hery : Ao amin’ny efitranony mihitsy aza ! Fa ahoana?
Tiana: Sao dia hitany ity lohahevitra noforoninao ity ka heveriny tsy azo itokisana ianao fa mampiahaka ny tsiambaratelon’ny fianakaviana?
Hery : ...........
Tiana : Izay ary ilay efa nampoiziko ! loza ampian’ny loza ny anao raha izany ; tsy maintsy ataonao izay hifankahitàna aminy mivantana ; tandremo anefa, mety mbola tohina ny fony fa tsy maintsy alefanao mailaka ihany aloha ny fifonanao.
Hery : Ka raha toa tsy mbola hitany ilay izy dia hitonon-tena eo ve aho. Tsy vao mainka loza! Ka ilay izy koa anie tena very hevitra aho fa tsy inona akory e! Nila namana aho hilazako ny manjo ahy fa tena tsy tantiko intsony. Te hiantso an’i A mafy aho fa tsy tafita mihitsy tamin’io andro namoronako io takelaka io.
Tiana : Azo eritreretina izay, fa sao dia misy zavatra adinonao tanteraka aza teo amin’izay fotoana nampiova hevitra azy tsy hifandraisany aminao intsony?
Hery : Zavatra toy ny inona ohatra ?
Tiana : Asa, mety fisaorana ohatra. Toa fifonana sy fitoriana fitiavana foana no alefanao nefa mety tsy izay no andrasany ; sao dia nisy zavatra lehibe nataony taminao talohan’io nefa adinonao tanteraka ny nisaotra azy. Vehivavy anie aho e ! Malahelo ihany aho raha misy zavatra ataoko amin’olon-tiako nefa tsy noraharahiany akory. Diniho sy saintsaino tsara aloha ny niainanao hatramin’izay. Jereo ny ora, ny minitra sy ny segondra niarahanareo mbola tena nifandraisanareo be!
Hery : Tena tsy azoko veroka mihitsy, aleo aho aloha hiasa dia misaintsaina lalina ny momba izay. Antsoiko ihany ianao rehefa miverina ato an-tsaiko izay zavatra hadinoko. Veloma.
Tiana : Tsy eto intsony aho aloha raha tsy rahampitso maraina tahaka izao. Mahereza indrindra Hery an! Tena tsapako mihitsy ny fitiavanao an’i A; Raha izaho no manana olon-tiana tahaka anao dia mirehareha mihitsy aho. Veloma ary.
Nofaranana ny fifandraisana, nisaintsaina teo i Hery, namerina tao an-dohany ny tany Ambatofotsy, ny zavatra rehetra nitranga ny alin’ny alatsinainy.
Ny asa rahateo tsy azo avela fa nitombo hatrany amin’ity andro efa akaiky faran’ny volana. Revo tao indray i Hery ka toa nandalo taminy fotsiny iny alakamisy tontolo andro iny.
Nony tonga tany an-trano avy eo.Tsy mbola azony an-tsaina mihitsy izay zavatra hadinony izay, na dia naverimberiny foana aza ny fotoana niarahan’izy sy Alexia ny alatsinainy sy ny talohan’izany. Tsy hitako mihitsy hoy izy.
Natsofony tamin’ny solosaina ilay tariby fifandraisana an-telefaona dia nampiditra ny fahana izy ary nijery indray ny tohin’ilay tantara nosoratan-dry Tourbillon de l’Amour sy ny tariny, tena mahay maminany ry zalahy ireto, aleoko tsy mamaky ity intsony fa harary fo eo ny farany.
Nisakafo izy dia namindrafindra ny fanaka handraisana ireto namany ny ampitso hariva.
Dia inona izao no hotantaraiko amin’i Haja rahampitso raha tsy mahita an’i Alexia izy, tsy hanontany ve izy fa angaha nisaraka izahay roa ?
Tsy manaiky izany aho, fa raha mbola misy afo mitsilopilopy fotsiny atao anatiko ato dia ampy hanazava ny foko hidraradrarako ny fitiavako an’i Alexia. Tiako izy, tsy mody tia fa tena tia tokoa.
Tsy niala tao an-tsain’i Hery ny endrik’i Alexia. Endrika mahafatifaty mahababo fo avy hatrany. Naveriny tao an-tsainy ilay fotoana niraisan'izy roa ara nofo voalohany. Tsy ho hadinoko mandrakizay iny fotoana iny hoy izy. Tadidiny fa fetim-pahatsiarovana ny vaninandro nahaterahan’i Alexia tamin’izay.
Vao nandray ny faha-fito ambin’ny folo taonany izy tamin’io. Ny ankizy namany rehetra any ambany mitotorebika tsy ifandrenesana amin’ny dihy sy ny vazo isan-karazany. Izy roa any ambony mifanorokoroka sady nifampiondakondana mifandefa hafatra amin’ny safosafo tsy nisy ohatran'izany.
- "Hery, tiako homena anao androany ny fanomezana faran’izay lafo vidy indrindra aty amiko ; ny tenako iray manontolo no omeko anao. Ianao no tiako hampiala ahy amin’ny maha-tovovavy, hirosoako amin’ny maha-vehivavy ahy amin’izay. Raiso aho ho anao."
Aleo i Hery mihitsy no asaintsika mitantara azy ...
Azoko tsara ny tian’i Alexia ho lazaina. Zavatra tsy mba nangatahiko azy mihitsy izay sady mbola tsy dia ela koa no niarahanay. Faly aho anefa sady norohako teo amin’ny molony izy.
Naveriko vetivety tato an-tsaiko ireo lesona marobe efa voaraiko raha hanao firaisana ara nofo voalohany amin'ny tovovavy virjiny. Sambany aho no hiaraka amin'ny tovovavy virijina na dia efa maro ihany aza ireo vehivavy niarahako. Nisy iray tamin'ireny vehivavy ireny no nampianatra ahy tamin’ny antsipirihany ny tokony hataoko rehefa tahaka izao. Tojo ilay niriko tokoa aho izao, ary tsy tiako raha hanenina noho ny nataoko ity tovovavy manolotra ny tenany ho ahy manontolo ity. Tsy tiako mihitsy ny hanenenany fa indray mandeha tsy azo iverenana intsony ka mila fahamalinana be dia be avy aty amiko.
Ny fanehoam-fitiavana aloha izany no voalohany indrindra hoy aho niezaka namerina ny lesona efa nianarako. Manaraka izany, izay tsy azo atao ambanin-javatra mihitsy ny fanomanana ny sainy, na dia tiany aza ny hiroso avy hatrany dia tsy maintsy atao izay hampifantoka tanteraka azy sy hahatokisany ahy mba hahazoany fifaliana ka tsy hahenoany firy ny fanaintainany. Rehefa avy eo tsy atao ampirotorotoana mihitsy fa atao ampahatoniana avokoa izay atao rehetra.
Poa toy izay no nisaintsainako an'ireo rehetra ireo dia iny aho no nitsangana nanidy ny efitranony. Tsy niteny mihitsy i Alexia fa nandry teo ambony fandriana izy sady nibanjina ny tenako iray manontolo. Ilay jiro kely teo amin’ny sisim-pandriana no hany sisa nanazava anay roa. Namonjy nipetraka teo anoloany aho dia niharina koa izy, nosokafany ny feny hidirako manakaikikaiky azy dia nifanoroka moramora izahay sady nikaroka mafy ny lelany aho. Nofihiniko izy sady nosafosafoiko malefaka ny lamosiny, notadiaviko ilay tadi-nonony dia nosarahiko moramora. Novako ny bokotry ny ankanjony ambony rehefa avy eo dia nanao tahaka izany koa izy tamiko. Zipo fohifohy izay no nanaovany, misy elasitika, efa tafanika teo amin’ny maojany noho ilay fikisahany hamonjy ny vatako teo, hany ka mora tamiko ny nampiakatra azy handalo ny tratrany, ningainy koa ny sandriny roa handalovan’ilay lamba sady narahin’ny tanako misafo ireto sandry rakofan’ny hoditra malefaka izay toa sasa miandry ny hotolomiko.
Ny atin’akanjony sisa no teny aminy, izaho indray efa tsy nisy akanjo intsony ny tapany amboniko. Nosafosafoiny moramora ny tratrako hitsapany ireo nofo sy hozatra maneho ny tanjako. Mbola tsy navelako hesoriny ny fitafiako ambany mba ahafahako mifehy tsara ny fisehoan-javatra iray manontolo. Nosarihiko moramora ilay tadi-nono teo amin’ny sorony. Tsy naneho fandavana mihitsy i Alexia. Indro nono roa mahafatifaty tarafin'ny hazavan'ilay jiro mitsilopilopy teo antsisim-pandriana no nanoloana ahy. Notazomiko tamin’ny tanan-droa ny ambany sorony ka ny ankihibeko no nandalo nisafo ireto loha-nono roa iza efa nanomboka taitran’ny fitiavana natolotro azy, nitsiky kely ilay malalako.
Nifanoroka indray izahay, nalefako tany amin’ny lamosiny ny sandriko, nofihiniko, nahodiko hamonjy ny takolany ny molotro dia nampidiniko tamin’ny tendany. Avy hatrany dia niverina nandry tsimoramora tamin’ny lamosiny indray izy, ny molotro kosa, nanaraka ny fatoriny ka nandalo ilay havoana amin’ny nonony iray. Ilay ondana teo ambony fandriana no nisakana azy tsy ho marin-drano tanteraka, vao tafajanona izy dia nifanandrify tamin’ny molotro ny loha-nonony ; norokorohako moramora teo iny ary tsy niala mihitsy aho fa tahaka ireny mpivahiny mitety tendrombohitra ireny, tsy maintsy mandalo havoana aloha raha te hidina eny andohasaha. Nisento mora izy, nafindrako indray ny tanako hamonjy ny takibany, niezaka mafy aho mba tsy hiala amin’ny vatany mihitsy ireto molotro ka hitsapàny ilay fitiavana tsy ankijanona hamelombelony ilay ny lavaky ny fahafinaretany iray manontolo.
Nisefosefo kely i Alexia dia nalefany teny amin’ny lohako ny tanany ilany sady nanindry kely ahy ihany izy.
Nampiako tosika tamin’ny lela avy eo ny orokoroka, tsapany ilay hafanana manenika ny vatany. Izy amin’io ilay kilaoty kely sisa no teny aminy, tsy mbola nokitihiko mihitsy fa ny hahazoany fahafinaretana amin’ity vatany ambony aloha no tiako hatosaka voalohany indrindra aminy.
Nalefako hidina amin’ny kibony amin’izay ny lelako, nihodina moramora manodidina ny foitrany; nisy hozatra mangorintsina azy tany anatiny tany ka nanainga ny maojany nahazaka ny lohako iray manontolo. Reko fa somary nimenomenom-pitiavana izy.
Nosarihiko avy eo ny molotro handalo ny faritra ambany, nolalovako fotsiny ilay tadin’atin’akanjo fotsy ranoray dia nanohy nidina hanaraka ny feny sy ny ranjony aho. Ny tanako indray manainga ilay fe sy ny ranjo hamonjy ny soroko hahamora ny fanorohako azy.
Te hikiakiaka fitiavana ilay malalako fa tsy nahateny, ny tanany no namonjy haingana ilay string, te-hanala azy mafy nefa notazomiko. Asa, mety nanelingelina azy angamba, nefa tena niriko mihitsy fa izaho ihany no hanala azy teo.
Toa azony avy hatrany ilay hafatro na dia tsy nisy teny iram-bava aza naloaky ny vavako. Navelany amin’izay aho hanohy izay ataoko, reko any anatiny any ilay onjam-pitiavana manefika azy, niala teo ambony fandriana aho, ny molotro amin’io mbola eny amin’ny kibon-dranjony ihany mba hampitohy hatrany ilay hafatra ampitiavana alefako any aminy.
Nitsangana teo amorom-pandriana aho, nalefako indray ny tanako hamonjy ny nonony, nidina avy eo hamonjy amin’izay ilay faritry ny fahasambarana tsy hita pesimpesenina. Faritra madio tsy misy pentina, fa toy ireny ala kitroka voaaron-janahary ireny ka tsy nisy sahy nikapa na dia hazo iray aza. Tsapan’ny ratsan-tanako ilay faritra mafana efa mandom-paharavoana. Tsy andriko intsony, nataoko nandroso sy ny niverina ireto ratsan-tanako hanafosafo, hotsaky ny hamandoana tanteraka ny fivaviany. Taratro fa efa lena ilay lamba kely fotsy hany teny an-kodiny. Fantatro avy hatrany fa tena misamboaravoara aminy ilay onjam-pitiavana mampite-hikiakiaka azy ilay malalako. Ny fihetsiky ny tanako dia efa mampiova ny fisefosefony, nesoriny tampoka niala teny amin’ny soroko avy eo ny tongony ka nidaboka teo ambony fandriana, nivezivezy, manokatra ny feny hahamora ny safosafon’ity tanako ilany izy.
Ny filahiako tamin'io efa tena henjana tsy nisy ohatran'izany eo am-pitsapàna ity fivaviana madio hisantatra ny fiainam-baovao. Toa henoko mihitsy ny filahiako mitalao manao hoe « avoahay amin’izay fa mba te hahita hazavana e!" Nampandeferiko ihany anefa aloha ny filako sy ny hetahetako fa tsaroako tsara ilay dingana tsy maintsy andalovako. Efa notsapainy ny filahiako fa mbola tsy hitany ary azoko antoka fa miandrandra mafy ny fotoana hahitany azy izy.
Somary natosik’i Alexia ilay atin’akanjo hiala, tonga dia nampiako izy fa efa ela loatra angamba no nitadiavany hanalàna azy iny. Niseho teo ambany masoko amin’izay ilay lavaky ny fitiavany izay tena efa vonona handray fahasambarana. Ny ratsan-tanako amin’io mbola manafosafo hatrany ny manodidina azy, nandramako nalefa tany ny fanondroko iray, nisento mafy izy, reny miakatra any anaty lohany any ny fahasambarana entin’ity fitaovana atolony ity malalany ity. Navoaka indray ilay fanondro dia nanafosafo ilay bokotra kely mibotsina miendrika loha-nono tsy lavitra teo aho. Vao voakitika fotsiny anefa iny dia niainga tsimoramora ny maojany fa nahare onjam-pahasambarana hafa indray. Nitombo hatrany ny fahamandoana nivoaka tamin’ny lava-pitiavany. Ny molony amin’io mimonomonona te hiteny fa tsy mahita ambara, ny masony mikipy miezaka manamboatra sary tsaran’ity malalany manome fahasambarana ho azy.
Novahako tamin'izay avy eo ny bokotry ny patalohako.Tsy nanaosarotra fa tonga dia niborotsaka raha vao natosika nidina kely fotsiny. Ny tongony no nampiasainy hanala azy tanteraka nony avy eo. Ny silipo sisa no teny an-koditro izay nibotsina aok'izany toy ireny mpanao ady totohondry efa vonona eo ambony ringa. Naveriko indray ilay ratsan-tanako teo hiditra tany anatiny tany, tahaka ny sambokely atopatopan’ny onjan-dranomasina ny fijery azy. Ny fidaboky ny onja amin’ny sisin-dranomasina no mifandraika amin’ny fisentony sy ny fisefosefony. Niondrika aho handefa indray ilay lelako hanafosafo ity vatany, nolelafiko mora teny amin’ny nonony, nidina teny amin’ny kibony, niodinkodina teo amin’ny foitrany, ny ratsan-tanako amin’io mbola mijanona ao aminy ihany manomana mafy ity fivaviana virjiny hiroso amin’ny maha-vehivavy azy. Heniky ny fahasambarana ity malalako, efa tena vonona tokoa.
Saingy tiako ho tsapan’ny lelako izany maha-virijiny izany ka nidina teny amin’ilay faritry ny fitiavana mamy loatra aho, namboloin’ny oroko ny fofona somary masiaka manaitra ny atidohako rehetra, nolalovan’ny lelako ilay fisarahan’ny fivaviany efa vonton’ny ranom-pitiavana, nikiaka kely izy, kiaky ny fitiavana, hafa noho ny hafa tokoa ny herin’ny lela fa io no anisan’ny hozatra faran’izay malemy indrindra no sady ambony hafanana ka tsy misy maharesy azy raha mbola lalovany. Tsy naharitra intsony i Alexia fa nalefany tany amin’i filahiako ny tanany hitsapa ny habeny efa mijaridina, tahaka ireny mpilalao baolina ireny ka mirehareha hiditra ny kianja, nolalaoviny teo amin’izato fahasambarana efa manenika ity malalako amin’ny vatany iray manontolo. Niharina aho dia niezaka nitady ny famonoan-jiro, vao maizina anefa dia hoy izy: " -Hery an ! aza vonoina fa te-hahita aho?" Gaga ihany aho tamin’iny, ankoatry ny andro atoandro izay tsy azo anoharana dia amin’ny maizina hatrany no anaovan’ny vehivavy firaisana, ity malalako nefa te-hahita mafy. Tsy azoko mihitsy fa vao voalohany mampisantatra ny firaisana amina tovovavy virijiny ity, ka nanaiky koa aho, mba te hahita ihany koa na izaho aza.
Novelomiko indray ilay jiro kely, tahaka ireny sary hosodo-doko manintona ny maso ireny i Alexia miaraka amin’ity bikany soa sy mahafinaritra efa vonona tanteraka handray ahy ka hiara-miampita aminy ity fiainana maha-vehivavy.
Nampidiniko amin’izay ny silipiko, tahaka ireny miaramila mijaridina mitoraka fiarahabana amin’ny handriny ireny i Balita, efa tena ela niandrasana fa atao ahoana moa, ny lesona nampianarin’ny olona ahy fahizay anefa tsy maintsy ankatoavina mba tsy hanaonaoko foana.
Niakatra teo ambony fandriana amin’izay aho, novelariko moramora ny fen’ity mamin’ny foko, nikisakisaka moramora aho hanatona ny fivaviany, natohatohako moramora teo ny lohan’ny filahiako, nanafosafo, tsy mitsaha-miraraka ilay ranom-pitiavana, efa tena vonona tanteraka. Nandrasako kely, nampidiniko ambanin’ny fivaviany aloha ny filahiako dia ny ratsan-tanako roa indray no natsofoko moramora, nikiaka kely indray i Alexia, reny misy fanaintainanana miakatra any aminy. Najanoko teo aloha, somary novelariko tamim-pahendrena ireo fanondroko roa, ary tiako raha rovitra amin’izay ity hozatra manify maha-virijiny azy. Niandry kely fotsiny aho, reko mihitsy ny fanaintainany kanefa ny fahasambarana efa nolalovany teo dia mifangaro amin’izany ka nanadinoany ny mety hanjo azy.
Nesoriko amin’izay fanondroko, dia nihorirana aho namonjy ny lohany, nanakatra ny molony dia nibitsibitsika taminy nanao hoe : - "tiako raha eo ambony ianao." Nanaiky izy, sady niharina, izaho kosa nandry tamin’ny lamosiko. Niondrika nanoroka ahy izy dia naka lamba fotsy madio dia madio tao ambany ondany tao, tena efa vonona tokoa hatry ny ela hay i Alexia, tohina ny foko tamin'ny fihetsiny. Notsapainy sy nojereny tsara ity filahiako ary hitany fa tena nihenjana be, napetrako teo amboniko aloha izy, manatrika ahy, voasintona teny amin’ilay fivaviany ny masoko sady tarafin’ilay jiro tsara ka noraiketiko tao an-tsaiko ny firafiny soa izay tsy ho adinoko mandrakizay.
Napetrako teo ambonin’ny ahy izay mbola mitsilany manaraka ny kiboko aloha ilay lavaky ny fitiavany, ningaiko tamin’ny maojako ny vatany iray manontolo. Ny safosafon’ny vatan’i filahiako tamin’ny fivaviany efa mando no nampiakatra indray ilay hasambarana tsy hita noanoa tamin’i Alexia. Nasaiko nihantona kely fotsiny izy hijoroan’ny filahiako dia nampifanandrifiako ny ahy sy ny azy. Nasaiko nidina moramora izy avy eo dia injay fa nitsofoka sady efa vonton’ny hamandoana rahateo koa moa.
Tsapako tokoa ny fanaintainany nefa tsapako ihany koa fa nahatsapa hasambarana toy izay efa nolalovany teo izy. Vao tafiditra tany anatiny tanteraka aho dia tsy navelako nihetsika mihitsy izy aloha. Tsy ela taorian'izay dia indro nivoaka avy tao anatiny tao ilay rà tarafin’ny jiro mitsilopilopy, ra manamarika ilay fahadiovany izay natolony ho ahy samy irery ary ho ahy manontolo.
Nosintomiko teny an-tanany ilay lamba fotsy madio tahaka ny oram-panala dia nofafako ilay ra. Somary niondrika kely izy nijery. Natopiko teny amin'ny masony ny masoko. Te hiara-mizara aminy izay fanaintainana aho. Vao nifanena anefa ny fijerinay dia tsiky no natolony ho ahy. Somary nihetsika kely izy kanjo mbola nisy naharary azy ihany, nijanona teo amin’ny toeranay teo izahay roa, efa ho minitra iray.
Ny masonay nifampijery no nampita hafatra hifampizaràna ny fanaintainany. Ningaiko kely izy avy eo, nakipiny ny masony fa tena mbola maharary azy ilay fihetsika, nohozongozoniko ny maojako hampihetsika azy, narahiny fotsiny izay onja nalefako, elaela tahaka izay ihany , nanomboka niverina taminy ilay fahasambarana teo, tsy fantany intsony fa toa nahafinaritra azy ilay maharary nefa arahin’ity fahasambarana mandondom-baravarana ao anatiny ao. Niainga tsimoramora teo ambony maojako teo izy, nisefosefo mafy, ny fony midobodoboka tsy misy ohatr’izany, nikiaka indray mandeha dia namonjy nidaboka tany aoriana; tamin’izay fotoana izay no tonga ihany koa ny fahasambarako ka nifatsitsiatra ilay ranon’aina izay efa te hibosesika hivoaka efa hatry ny ela.
Heniky ny fahasambarana izahay roa, tena tsara, tena hafa kay ilay voalohany, tsy hadinoko mandrakizay eo amin’ny fiainako.
Afaka kelikely, nihodina avy eo i Alexia namonjy ahy, nikisakisaka ka somary taitra ny amin’ity hatsiaky ny ranon’aiko teo ambony fandriana, noraisiny indray ilay lamba fotsy misy ra teo dia namafany izay ambiny mbola tavela teo ambony lambam-pandriana. Nifanoroka izay tsy izy izahay roa, velona indray ilay fantsona iray ifampitanay ny hafatra marobe tsy vitan’ny teny ny mamboraka azy.
Nijanona natoritory aloha izahay, nifampisafosafo, nifampijery tamim-pitsikiana.
- "Hery, tiako raha ho ahy irery ianao!"
- "Alexia, fiainam-baovao no iarahako aminao!"
Tsy tapitapitr’izay, injay fa nisy nandondona tao am-baravarana,
- "Ato ve ianao Alexia?"
Tsy nisy namaly izahay fa nangina fotsiny tahaka ireny hoe tsy misy olona ireny. Nony afaka kelikely dia niala teo ambaravarana ihan ilay niantso. Natompiko teny amin'i Alexia ny masoko ary dia tsiky malefaka feno fitiavana no navaliny ahy.
Iny Hery handeha hiverina hiasa iny ny tolakandro no taitra tampoka fa nisy nikapokapola mora tao amin'ny sorony avy ao aoriana. Nitodika izy,
- "Hay ve ialahy indray ity ry Haja, dia ahoana letsy?"
Mpinama tsy mifankafoy i Haja sy Hery. Mifampitondra toy ny mpirahalahy mihitsy izy roalahy. Lahitokana toa azy koa mantsy i Haja. Efa nifankazatra fony kely izy roalahy ary dia mbola nampitambaran'ny vitana hiray toeram-piasana ihany koa rehefa lehibe taty aoriana. I Haja no nahafantarany an’i Alexia raha ny tena marina.
- "Dia ahoana l’ty, revy be izany any amin’ialahy amin’ny zoma an! milay izany ka. Tsara rehefa nofaranan’ialahy amin’izay ny andro fisaonana. Sady efa ela koa aho letsy tsy nahita an’i Alexia! manao ahoana letsy izy izay?"
Tsy nahita havaly i Hery, ny ora fidirana efa antomotra, i Haja rahateo mbola any amin’ny rihana ambony no miasa.
- "Amin’ny zoma hariva letsy an! aleo rehefa mirava isika roalahy dia tonga dia miaraka amiko mba manampy ahy mikarakara ihany koa," hoy i Hery namaly.
- "Fa angaha tsy hanampy an’ialahy i Alexia, izaho aza mbola hody aloha haka ny ankizy, ka ialahy ‘ty koa! tsy ialahy ihany ve no niteny hoe mahazo mitondra izay tiany ho entina e!"
Very hevitra teo i Hery, ahoana tokoa moa izany, i Haja izany izao mieritreritra ny hahita an’i Alexia, dia tsy maintsy mbola hampahafantariko azy ve ny marina, ny marina inona anefa, ny fiainako niaraka tamin’i Malala ve, sa ny fampirafesan-dRatrema an’i Malala ?
Na ho ela na ho aingana tsy maintsy ho gaga izy fa tsy eo i Alexia amin’ny zoma. Malala, Malala, toa mihodinkodina eo amin’i Malala foana koa izany fiainako manontolo izany, misy mahamarina azy ihany ilay hoe ndàna mitsoaka ny fiainanao amin’izao dia avelao any izay hitranga. Inona tokoa moa, raha ilaozako anie i Malala, efa manana ny rainy eo amin’ny lalàna ireo zanako roa ireo. Fa i Alexia no mampalahelo ahy.Zazabodo kely sady tsara tarehy no mahafatifaty, mahate ho tia ary tena tia fa tsy mody tia.
Noraisin’i hery indray ny findainy, dia nantsoiny ity mamin’ny fony, nahazo, nidobodoboka kely ery ny fony fa handre ny feon’ity malalany, kanjo tsy nisy nandray, nisy nanapaka aza nony avy eo. Naveriny nantsoina afaka kelikely, tsy tafiditra intsony. Nalahelo i Hery, mbola tena nankarary ny fon’i Alexia ilay tsy niraharahiako azy omaly maraina, hoy izy tany an-tsainy tany. Izao koa no loza, efa vita ny fizarana asa nataony tamin'ilay orinasa iray iry ka dia tsy any am-pianarany intsony izy izany no sady tsy any am-piasàny ihany koa fa mamita ny lahatsoratra famaranana ao an-tranony. Izaho anefa tsy mahazo miditra any akory. Raha andramana antsoina amin’ny Telma,... noraisiny ny telefaona dia niantso indray izy.
- "Allo, saika hitady an’i Alexia anie?"
- "Iza izao azafady," hoy ilay feo tao anaty antso;
- "I Hery ka,"
- "Hay Ramose Hery, lasa niaraka tamin’i Madama any izy ka tsy fantatro rahoviana vao hiverina."
- "Ilazao ary izy rehefa tonga fa niantso teo aho e ! Misaotra ary!"
- "Veloma tompoko!"
Saika hiantso an’i Malala indray i Hery nefa, raha fantatr’i Alexia ve fa izaho no miantso hoy izy niteny irery tsy vao mainka ho loza. Tsy hitany intsony izay atao, sady vao nipetraka ilay vata fitenenana dia naneno indray ny telefaona ka resaka asa no niantsoan’ny lehibeny azy, dia revo tamin’ny asa teo indray aloha ny tovolahy.
Efa nirava ny mpiasa vao nanokatra ny takila misy ilay mailaka noforoniny izy. Naveriny novakiana aloha ilay hafatra nalefan’ilay mpianatra eny Ankatso, lehilahy ary ve izy ity sa vehivavy? Dia namaly ilay hafatra i Hery, tsy dia nataony lava ny resany:
Misaotra aloha namaly ny antsoko, raisiko ho fandavantena lehibe ny nataonao. Kanefa mba te hahafantatra ny momba anao ihany aho, vhv sa lhl no miresaka amiko, raha azoko fantarina koa ny taona sns. Dia aleoko koa anontaniana dieny izao raha tokony hifankahita!
Misaotra anao mialoha.>>
Nalefany avy eo dia nosokafany indray ilay takelam-pifandraisana wanadoo.mg, tsy mitsahatra ny mitombo ny valim-panontaniana, dia nosokafany indray. Ny teo aloha ihany, ilay tantara mbola mitohy dia revo ery izy namaky sady nitsikanikany ny amin’ny tohiny nanaovan-dry zareo fôrômista ny mety ho tohin’ny fiainany. Taitra tampoka izy,fa hay misy teny tokony holazainy ilay olona mifandray aminy. Naveriny nosokafana indray ilay mailaka.
Nisy hafatra vaovao tao. Tena vetivety izy izany, hoy izy fa mijery tranonkala koa izany ilay olona any ho any. Novakiany:
« Tiana no anarako, vhv mpianatra ary mbola tsy manambady ary manomana maîtrise.
Tsy dia tiako loatra ny iantsoana anao hoe : kelimaditra fa mba omeo izay anarana tianao iantsoako anao hafa aho. Tu as un nom n’est-ce pas ?
Ary aza tonga dia maika aloha ny hifankahita fa aleo mifankafantatra tsara ny toetra, dia manantena aho fa hanome izay any am-ponao marina ianao>>.
Tsss, tsy hanana fotoana hamaliana izao dia izao aho, ity solosaina ity koa mbola tsy misy ahafahana mifanoratra eo noho eo raha ity tranonkala yahoo.fr ity. Aleo aloha valiako amin’ny mailaka ihany.
« Misaotra fa namaly ahy vetivety tokoa ianao, saingy mbola misy fahasahiranana kely aho aloha, tsy mampaninona fa azonao antsoina hoe: Hery aho.
Ny atahorako indrindra dia mety olona fantatro ianao ka hanaparitaka ny toe-javatra mitranga amin’ity fianakavianay ity. Mangataka aho mba tsy hilazalazanao izay zavatra mety hoteneniko satria tsy ny trangan-javatra rehetra akory ireo voalazako anaty forum ireo. Ary mino aho fa ireo zavatra voalazako ireo dia tsy misy mahalala afa-tsy izahay ao anatiny ihany, tsy ho tsikaritry ny olona eny ivelany mihitsy.
Fa mbola marobe ny vaovao nitranga indrindra tato anatin’ny andro vitsivitsy. Niova be ny fiainanay fa manjary nisy valifaty nataon’ilay raim-pianakaviana.
Tena tiako ilay fofombadiko, satria efa vita fisehoana izahay, ka izany no maha-vaka ny saiko. Efa tena raiki-pitia be loatra aminy aho fa ny hetraketrak’ilay reniny no nahatonga ahy nanao zavatra mamoa fady.
Tsy haiko mihitsy fa lasa manana fahatokisana be anao izany tampoka aho ry Tiana. Ary inoako fa tsy hanosi-boho tanana ahy akory ianao !
Misaotra fa rahampitso indray aho mamaky ny hafatrao ».
Nalefany ilay mailaka. Nieritreritra kely teo izy : « tsy misy mahalala afa-tsy izahay ao anatiny ihany » : raha fantatry ny ao amin-dRatrema tokoa moa io takila noforonina io, dia asa angamba. Raha i Malala aloha tsy mandraharaha izay internet, i Ratrema koa, tsy dia mino loatra aho, fa i Alexia ... ka izy aza anie tsy mety azoko mihitsy rehefa antsoina e! Tsy tokony ho fantany ve fa tena mijaly ny saiko amin’izao fotoana izao?
Najanony ilay solosaina dia nivoaka ny fiasàna izy. Nitombo ihany anefa ny alahelony an’i Alexia ka nivily lalana izy ho any aminy. Toa manomboka tsy zakan’ny sainy izany tsy hahita an’i Alexia mandritra ny andro maromaro izany, indrindra hoe tsy raisin’i Alexia mihitsy koa ny antsony. Nahatsiaro nanenina izy tamin’ilay firaisana ara-nofo tampoka niarahany tamin’i Tahiana. Tsy dia nanan-kevitra ny hitantara izany na amin’iza na amin’iza anefa izy fa ny fahitàny an’i Alexia fotsiny dia efa ampy hampitony ny alahelony.
Iny izy efa manaraka ny sisin'ny tambohon'ny tranon-dRatrema iny no indro hitany nitsotsotsotso avy any ilay fiara 4x4 sady nampiasa fanairana teo ambavahady miantso ny mba hamohana ny vavahady hidirany.
- Loza ity, inona no ataoko… ho tratra eto aho marina! Hoy izy tany antsainy tany.
Vetivety dia nivoha ilay vavahady lehibe. Ilay fiara 4x4 koa moa ireny mainty fitaratra ireny ka tsy nisy irika mihitsy afahantarana izay tao anatiny. Nihodina tampoka i Hery, nisy fiara kely teo akaikiny teo dia namonjy niafina taorinany izy mba tsy ho hitan-dRatrema izay ninoany zato isan-jato fa nitondra io fiara io. Vetivety taorinan'izay dia nikatona indray ilay vavahady rehefa tafiditra ilay fiara.
- "Ouufff, efa nivarahontsana aho," sady tera-tsemboka izy.
Kelikely taorian'izay anefa dia nisokatra indray ilay vavahady vy fidiran’olona.I Hery amin’io efa nanohy nandroso nanatona ilay vavahady. Tsy hitany izay hatao, hiodina hiverina handositra sao dia ataon’ny mpandalo ho mpangalatra ka dia naleony nanohy ny diany.
- "M’se Hery. Efa hitako mihitsy ianao tam’za nanokatra ilay vavahady teo; mitady an’i Madimôzely Alexia angaha Ram’se?"
Hay ity ilay mpiambina tanàna niaraka taminy nividy fanafody tamin’ny alatsinainy alina.
- "Aza mampitahotra rangahy fa tena .. ao angaha i Alexia?"
- "Iéé, ao mihitsy izy fa efa niverina niaraka tamin’i Madama teo, toa avy nandalo tany amin’ny dokotera hono izy ireny, ireo ankizy ao an-trano no nilaza izany. Antsoiko ve izy fa ato ianao Ram’se?"
- "Ary Ingahy Rainy ve ilay niditra tamin’ny 4x4 teo?"
- "Tena izy mihitsy iny ka!"
- "Izao ary e! aleo aho handalo fotsiny, ilazao ihany i Alexia fa nandalo teo i Hery hoe"
Niahotra indray izy dia nandray taratasy tany anaty kitapony tany, nosoratany hoe : « Alexia, tu me manques tellement, réponds à mes appels, je veux te voir » Nohidiany tao anaty valopy dia nasiany ny anaran’ity malalany tsy foiny.
- "Ity ary omena azy e! Misaotra dia veloma."
- "Veloma Ram’se!"
Dia lasa i Hery nandeha, tsy tena lasa anefa izy fa niandriandry teny lavidavitra teny toa nanantena mafy an’i Alexia hivoaka ny vavahady hihazakazaka sady mitomany hiantsampy eny amin’ny sorony. Izy amin’io efa mieritreritra lalina izay teny havaliny ity malalany. Ny fony feno fitiavana midobodoboka manaraka ny gadon’ny famataran’ora, ny masony tsy miala mihitsy amin’ilay vavahady atsilopilopin’ny jiro, miandry izay hisokafany fotsiny. Tsy nampaninona ahy mihitsy izany, na dia efa miha-maizina aza ity andro hoy izy.
Noraisiny indray ny findainy, natsoiny i Alexia, mbola tsy tafiditra ihany ny antso. Tsy nahakivy azy izany fa naleony niandriandry teo amin’ny toerany teo ihany. Izao tokoa rehefa tia hoy izy fa dia miandry izay higadonany fotsiny.
- Tahaka ny sokina nanani-bato letsy ialahy ry Hery ka tapi-dalan-kaleha. Izao mitogaigy tahaka ireny tovolahy kely vao 15 taona matahotra ny ho hitan’ny ray amandrenin’olona ireny dia tsy sahy fa miafina anjoron-dalana nefa te mba hahita mafy ilay malalany.
Afaka dimy ambin’ny folo minitra, injay fa henony nikarantsana ilay vavahady kely fivoahan'ny olona. Indro i Alexia nivoaka ny vavahady. Ankanjo fotsy ambony sy ambany no teny ankodiny. Somary maizimaizina ny manodidina azy, nefa ny fitafiana nanaovany dia toa namerina ny hazavan'ny jiro teny aminy ho amin'ireo nanodidina azy. Nitoditodika izy nijery ny arabe toa mbola nanantena ny hahita ity nandefa taratasy taminy. Tsy nampoiziny, injay nisy feo niantso tery lavidavitra tery nanao niantso ny anarany: "Alexia!" sady nihazakazaka nanantona azy i Hery. Izy koa tsy nahajanona teo amin’ny toerany fa niampita ny arabe hanatona ity fitiavany sady nanganohano ihany ny masony. Nosokafan’i Hery ny sandriny roa handray ity mamin’ny fony. Nofeheziny indray mandeha monja dia nahankiny tamin’ny tratrany sady nobatainy hotrotroina. Diboky ny fitiavana ny fon'izy roa ary ny ranomaso latsaka aza dia toa zary naneho fifaliana tsy omby tratra fa tsy noho ny alahelo akory. Tahaka ireny olon-droa tsy nifankahita efa hatry ny taona maro ireny ny fahitàna azy ireo. Nifanoroka elaela sady nifampijery dia avy eo niverina nifanoroka indray na dia samy tsy nisy nahaloa-peo aza. Indro misy hazavan’ny fiara mirimorimo tsy lavitra ny sisin'arabe nijoroan'izy roa sady nandefa antso fanairana. Nikisaka namojy ny sisin-dalana haingana izy roa.
...Teo vao taitra i Hery fa hay nofinofy fotsiny ilay nitranga rehetra teo izay vokatry ny eritreriny lasa lavitra teo am-piandrasana izay ho fivoahan’Alexia teo ambavahady. Nojereny ny manodidina azy fa toa tsy nisy olona akory. Kivy izy sady nisento tokana. Tsapany fa hay mafy tokoa ny manjo rehefa tsy tian'ny olona hifandraisana ireny. Izy anefa no mazana mpanao ny toy izao tamin’i Malala sy Alexia ary nisy naharitra andro maromaro mihitsy aza tamin' izany.
Tapakevitra ny handeha izy ary dia nitodi-doha moramora hamonjy ny tananany. Toy ireny akoholahy voakapoka tsy mahatàna rambo intsony ireny ny fahatsapany ny tenany.
Tao amin-dRatrema mianakavy…
Foana tanteraka ny fifaliana tao an-trano. Tsy misy mifampiresaka, ary tsy misy mivazavaza ihany koa. I Alexia moa efa manomana ny lahatsoratra famaranana izay namitany ny fizarana asany hany ka saika eo ampototry ny solosaina no andaniany ny androny iray manontolo. Raha mandeha mivoaka aza izy, dia miaraka amin-dreniny mandeha fiara fa tsy mba mandeha an-tongotra samirery intsony mihitsy. Diso fanantenana izy tamin’ity nataon-dRainy. Tsy nampoiziny fa nahavita hamaly faty andreniny sy Hery ity rainy. Lasa zary fanelingelenana ho azy ny fidradradradran’ny finday sy ny antso an-tariby ary dia naleony najanony avokoa raha mbola azony natao.
Izy mivady indray dia zara raha mifampiresaka. Tsikaritra anefa fa tsy mody alina intsony i Ratrema fa tonga aloha ao an-trano ary dia nandray anjara mavitrika tamin'ny fitaizana azy mianadahy kely. Mijerijery izay toe-pahasalaman'i Malala no ataon-dRatrema isa-maraina alohan'ny andehanany miasa dia mametraka ny vola mety hilaina dia lasa avy eo. Tahaka izany foana ny fiainana niseho tao amin-dry zareo nandritra ny roa andro misesy mandrapahatongan'ilay taratasy napetraky Hery tamin'ilay mpiambina tao ambavahady.
Avy namelona ny fahitalavitra Ratrema no nandondòna i Zefa:
- "Azafady Ram’se fa misy taratasy ho an’i Mademôzely Alexia ity. Tany amin’i M’se Hery."
- "Alexia!" hoy Rainy, niantso ny zanany tsy naka sarotra. "Midìna fa misy taratasinao ity."
Nidina i Alexia. Niezaka nitsiky ny rainy fa toa tsy hitan’i Alexia akory, ny masony amin’io bongon’ny ranomaso fa asa izay nampalahelo azy tao an’efitranony tao.
- "Misaotra," nojereny, sora-tanan’i Hery ny amin’ilay valopy. Niverina nanganohano indray ny masony sady niakatra haingana tany an’efitranony izy. Novahany ka hitany ilay hafatr’i Hery. Niditra tamin’ny tranonkala izy dia nanoratra ny hafatra vaovao ho an’ity malalany.
« Hery, mon amour, toi aussi tu me manques tellement »
Nieritreritra kely teo izy, raha tokony hampiana ilay hafatra.
Kanjo injay ny rainy mandondòna ao am-baravarana. Dia niofafàny ilay hafatra.
- "Alexia, avelao aho hiditra fa te hiresaka amin’izany zanako izany aho." Nataon-dRatrema tamin’ny feo malemy sy fo tony ny teniny sady naka seza izy hipetraka teo akaikin’i Alexia. Ity farany niankina tamin’ny soron-drainy sady nifokofoko nitomany no latsa-dranomaso.
- "Diso ny rainao anaka, mamelà ahy", sady nosafosafoiny ny lohan’ity zanany vavy tsy foiny indrindra ity.
Dia notantarainy teo ny zavatra rehetra nanjo azy nandritra izay enim-bolana izay. Tsy fantany intsony izay mety hampalahelo an’i Alexia fa dia naleony nampahafantatra ity zanany ny antsakany sy andavany ny momba ny fiainany sy izay antony nisakaizàny tamin’i Corine. Nibaboka izy fa vava tsy ambina ny azy ilay nadroahany an'i Hery tsy hiditra ny tranony intsony.
Tsy tonga dia niditra tao antranony i Hery rehefa tonga tany aminy fa mbola naka fisainana nipetrapetraka teo antokonam-baravarany teo aloha. Efa tena alina izy vao niditra ny tranony. Tranony izay tsy misy afa-tsy izy irery. Nahandro sakafo aloha izy dia avy eo tapakevitra ny handro sady hisaintsaina lalina ity manjo azy. Varimbariana teo izy ka notsindriany ny ankanjo nanaovany ilay atin’akanjo mainty navelan’i Tahiana. Adinony taneraka mihitsy ny fisiany na dia toa nandalovan'ny masony izao aza.
- Vehivavy iray ve letsy no mahatonga an’ialahy toy izao ry Hery! Tadidio letsy fa ny lehilahy tsy boka herin-taona a!
Ny nahavitan'ny sakafony no ela dia nidaboka natory izy.
Vao nazava ny andro dia efa taitra i Hery. Nifoha dia nikarakara sakafo sy nampirina ny tranony fa tsy misy afaka hanao izany rahateo koa tsinona.
Niomana izy avy eo dia lasa namonjy ny toeram-piasàny.
Valopy mihidy no niandry azy teo amin'ny biraony. Valopin’ny orinasa ihany. Noraisiny dia nosokafany. Hafatra fiangaviana azy hiakaratra tany aminny Tale teknika no tao anatiny. Nivoaka ny biraony izy, dia niakatra tany ambony. Niditra tao amin’ilay biraon’ny Tale, nifampiarahaba sy nanontaniany ny vaovao momba ny resaka asa. Resaka fifandraisana eo amin’ny orinasa no ventin-dresaka tao.
Na dia niezaka ny hifantoka tanteraka amin’izany aza i Hery dia lasalasa tany amin’i Alexia foana ny sainy. Toa ny lohany fotsiny no nahatokatony tamin'izay zavatra notenenin’ity lehibeny. Nanolotra valopy azy ilay lehibeny nony avy eo izay misy ny anarany teo ivelany. Teo izy vao tonga saina rehefa naheno ilay lehibeny niteny hoe: "alaivo any amin’ny mpiandraikitra ny fampitaovana any ambany ary ny anjaranao, dia ity ny taratasy hangalanao azy."
Gagagaga izy, loza izany, tsy nisy azoko ilay notenenin’ingahy Tale teo fa variana loatra aho tamin’ilay nofinofiko omaly hariva. Tena tsy mety miala ato an-tsaiko mihitsy ilay Alexia nihazakazaka namonjy ahy.
Nitsangana ingahy Tale dia mba nanaraka nitsangana koa izy.
- "Any ambany moa izy teo Andriamatoa Tale, mpiandraikitra ny fampitaovana!
- "Iéé! anontanio rehefa tonga any ambany ianao e!"
Dia lasa i Hery nidina, tsy azony an-tsaina mihitsy hoe: inona ary izany, fa ilay valopy koa mihidy ka tsy novahany akory na dia misy ny anarany aza.
Tonga teo amin’ny varavarana misy ny fampitaovana dia nanontany i Hery hoe: "Ato ve ity no tokony hateriko?"
Dia noraisin’ilay mpiandraikitra ilay valopy ary niditra tany an’efitra tany izy, niverina, nitondra kitapo mainty teny an-tanany.
- "Fantatrao ve Ramose hoe inona ity ? sady natolony an’i Hery.
- "Tena tsy azoko veroka mihitsy."